ဘောနပ်စ် – Grab Love Story
ကျော်တို့ ရောက်နေတာက တစ်နှစ်တာရဲ့ အကုန် ဒီဇင်ဘာလဆိုတော့ ရာသီစာ အချိန်မှီလေး သဘောမျိုးနဲ့ ကျော်ဖြစ်ချင်တာလေး စိတ်ကူးယဉ်ပီး ပေါက်တတ်ကရ တစ်ခုထပ်ရေးလိုက်မယ် ညော် .. အားပေးကြပါအုံး
ပို့စ်တိုင်း အားပေးတဲ့ ပိတ်သတ်နဲ့ နောက်ဆုံးပို့စ်လေး ဖတ်ပီး ထပ်ပေါင်းအားပေးတဲ့ ပိတ်သတ် စုလိုက်ရင် ၁၄ဝကျော်လောက်ဆိုတော့ ကျော်ပျော်တာပေါ့ညော် .. ရင်ထဲမှာ ဒချိ ဒချိပဲ .. 😉
အာ့ကြောင့် အခု ဖျာလာဦးထားတာ ညော် .. ဟွာလေ .. နောက်တစ်ခါ ဝင်ကြည့်လို့ နယူး ဆိုပြီး ပေါ်နေရင် ပို့စ်တင်လိုက်ပီလို့ မှတ်နော် .. ဒီဟာကိုပဲ မော်ဒင်ဖိုင်းလုပ်မှာ .. ဆက်ဆက်လာကျိညော်
အာ့လာပြောတာ .. ချိတ်ချိုးရဘူးနော် .. ကွီးတို့ .. ခေးတို့
ဟီး ;D ;D
တကယ်လည်း ဇွဲရုပ်ရည်က မဆိုး။ ကိုရီးယားမင်းသားတစ်ယောက်လို အရမ်းကြီးချောနေတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာမော်ဒယ်လ်ဘွိုင်းတစ်ယောက်လောက်တော့ ရုပ်ရည်ရှိသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း ဇွဲသည် ကျောင်းနေတုန်းက အတန်းသူ ကောင်မလေးများကြားတွင် တော်တော်ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကလေးမလေး တော်တော်များ၏ ပါးစပ်ဖျားတွင် ရေပန်းစားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ တစ်ချို့ သော ကောင်မလှလှလေး တစ်ယောက်စ၊ နှစ်ယောက်စနှင့်မူ ရေပန်းစားသည်သာမက သူ့ရွှေပန်းပါ စားစေခဲ့သည့် အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့သည်။
ဟုတ်သည်။ ဇွဲ၏ မိဘတွေသည် သာမန်တောင်သူ လက်လုပ်လက်စား သမားတွေ ဖြစ်သည်။ ဘာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းမှ မရှိ။ ဒီကြားထဲ မောင်နှမ သုံးယောက်ထဲတွင် သူက အကြီးဆုံး။ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ဇွဲ ရန်ကုန်ရောက်လာသည်ဆိုတာကလဲ တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ တစ်ခုထဲ မဟုတ်။ အဆင်ပြေလျှင် အလုပ်တစ်ခု ရအောင် ရှာပြီး သူ့နောက်တွင် အတွဲလိုက် ကျန်နေသေးသော ညီနှင့် ညီမလေးကို ပြန်ကြည့်ဖို့ ဖြစ်သည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ဇွဲသည် ကျောင်းတက်နေတုန်းကတည်းက ရရာအလုပ်ကို ရှာလုပ်ခဲ့သည်။ အလုပ်မရွေးဘဲ လုပ်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့ပေမယ့် လစာကောင်းကောင်းနှင့် အဆင်ပြေသည့် အလုပ်တစ်ခုတော့ လိုချင်ခဲ့သည်။ ခက်နေသည်က ဒါမျိုးအလုပ်ရဖို့ ဆိုတာကလဲ ဘာမှန်းညာမှန်းတာ မသိတာ။ တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့တစ်ခုကို အလုပ်ရှင်တိုင်းက လိုအပ်ချက်တစ်ခုအနေနှင့် တောင်းဆိုနေကြမြဲ ဖြစ်သည်။ ဇွဲတစ်ယောက် ကျောင်းပြီးလို့ ဘွဲ့ရသောအခါမှ နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်ရခဲ့သည်။
အိပ်ခန်း၏ ဟိုဘက်ခြမ်းကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ကောင်းမြတ်၏ အိပ်ရာပေါ်တွင် စောင်တစ်ထည်သာ ဗလုံးဗထွေးနှင့် တွေ့နေရပြီး လူကိုတော့ မတွေ့။ ဒီကောင် စောစောနိုးပြီး အပြင်ထွက်သွားတာလား .. ဒါမှမဟုတ် ညကတည်းက ပြန်မအိပ်တာလား .. မသေချာလှချေ။
ကောင်းမြတ်နှင့် ဇွဲသိသည်မှာ ကျောင်းကတည်းက ဖြစ်သည်။ ဇွဲ၏ ဒုတိယ ရည်းစားဖြစ်သူ နီနီခိုင်မာက ဓါတ်ပုံအလှ ရိုက်ချင်သည်ဆိုပြီး ပူဆာခဲ့ရာမှ ထိုအချိန်က အပျော်တမ်း ဓါတ်ပုံဆရာ စလုပ်နေသူ ကောင်းမြတ်နှင့် သိကျွမ်းခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ သူ့လိုမျိုး အညာသား ဖြစ်သူ ကောင်းမြတ်နှင့် ဇွဲ အဖွဲ့ကျခဲ့သည်။ အဆောင်တောင်မှ ကောင်းမြတ် ရှိရာ အဆောင်သို့ ပြောင်းနေခဲ့ပြီး ကျောင်းပြီးသည့်အချိန်တွင် ကောင်းမြတ်က ဖိတ်ခေါ်သည်နှင့် သူ့စတူဒီယိုအဖြစ် အသုံးပြုရန် ငှားထားခဲ့သော လမ်း၅ဝဘက်က တိုက်ခန်းတစ်ခုတွင် သူနှင့်အတူ လိုက်နေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရုပ်ရည်အားဖြင့် ဘာမှန်း မသိ .. ဂင်တိုတို .. လက်မောင်းနှစ်ဖက်တွင် တက်တူးအပြည့်နှင့် ဖြစ်သော ကောင်းမြတ်သည် လူကသာ ဘာမှ မဟုတ်ပေမယ့် .. တော်ကီကတော့ မဆိုး။ နောက်ပြီး ဇွဲကသာ အနုပညာမျက်စိ မရှိတာ .. သူကတော့ အနုပညာရော အကြမ်းပညာရော တော်တော်မျက်စိရှိသည်ဟု ဆိုရမည်။ သက်မဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သက်ရှိလူသားတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကောင်းမြတ်က ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဇွဲလိုမျိုး ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင် အလုပ်မရပေမယ့် တခါတခါ တွက်ကြည့်ရင် သူ့အကျိုးအမြတ်က ဇွဲထက်တောင် သာသေးသည်ဟု ဆိုရမည်။
ထိုကဲ့သို့ အကျိုးအမြတ်ဆိုရာတွင် ပိုက်ဆံတစ်ခုထဲသာ ဆိုလိုသည် မဟုတ်။ အလှဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်သော မော်ဒယ်လ်ကောင်မလေးများနှင့် နှစ်ပါးသွားရခြင်းလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အဲ .. ဓါတ်ပုံလာရိုက်သည့် မိန်းကလေးတိုင်းနှင့်တော့ ဒါမျိုး ဖြစ်တာ မဟုတ်။ ဒီနေရာတွင် ရိုးရိုးအလှ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးခြင်းနှင့် ဆက်ဆီဟု ခေါ်ရမည့် ဘော်ဒီအသားပေး ရိုက်ကူးခြင်း မတူလှသည်ကိုတော့ သိနားလည်ဖို့ လိုအပ်သည်။သာမန်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲ ဟိုဖော် ဒီဖော် ဒီဇိုင်းနှင့် လာရိုက်သော မိန်းကလေးများတွင်မူ ဆယ်ယောက်တွင် ငါးယောက်လောက်က ဇာတ်လမ်းစချင် စလို့ရသူများ ဖြစ်ကြသည်။
သောကြာနေ့ ရောက်နေပြီမို့ ရုံးသွားချင်စိတ် မရှိသေးဘဲ အိပ်ရာက မထနိုင် ဖြစ်နေလေသည်။ ရာသီဥတုကလည်း ဒီဇင်ဘာ ကုန်ခါနီးမို့ ခပ်အေးအေးလေး ဖြစ်နေရာ အိပ်ရာထဲတွင် ဆက်နှပ်ချင်သေးသည်။ ထို့ကြောင့် ဟိုအကြောင်း၊ ဒီအကြောင်း လျှောက်တွေးနေရင်းနဲ့ သူ့ဘဝဖြတ်သန်းခဲ့ပုံ အကြောင်း ရောက်သွားရာမှ ကောင်းမြတ်နှင့် စကားပြောချင်လာသဖြင့် လှမ်းကြည့်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကောင်းမြတ်တစ်ယောက် ခုတလော နွဲ့ဒါလီဆိုသော မော်ဒယ်လ်ပေါက်စလေးတစ်ယောက်နှင့် ညက်နေသည်။ အဲဒီ နွဲ့ဒါလီဆိုသည်ကလဲ မော်ဒယ်လ်ကြီး စစ်စစ်ရယ်လို့ မဟုတ်။ ဖေ့ဘုတ်တွင် ဆယ်ဖီရိုက်ကာတင်ရင်း နဲနဲလူသိများလာရာမှ မော်ဒယ်လ်လုပ်ရင်း ကောင်းမလားလို့ တွေးပြီး ဒီဘက်လိုင်းကို ပြောင်းလာသူ။ ကောင်းမြတ်ကိုယ်တိုင်ကလဲ ကင်မရာမင်းပေါက်စအဖြစ် အသက်မွေးနေသူဆိုတော့ ချိတ်အချင်းချင်း ချိတ်မိကြခြင်း ဖြစ်သည်။
နွဲ့ဒါလီသည် ရုပ်ကလေးကတော့ မဆိုး။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်အနေနှင့် ပြောရရင်တော့ သိပ်အထွားစား မဟုတ်။ သို့သော် ဒါတွေက နွဲ့ဒါလီကို ဇွဲအနေနှင့် အပြင်မှာ မြင်ဖူးလို့ သိခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းမြတ်ရိုက်ပေးသော ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာတော့ မရှိတာကို ရှိအောင် ထုတ်ပြပြီး ရိုက်ထားသဖြင့် ဓါတ်ပုံတစ်ခုထဲသာ မြင်ဖူးမည်ဆိုလျှင် နွဲ့ဒါလီသည် လုံးကြီးပေါက်လှဟု ထင်စရာ အကြောင်းရှိသည်။ ဒါကလဲ သိပ်တော့ ခက်ခဲလှသည့် ပညာမဟုတ်။
အကယ်၍ စာဖတ်သူသာ ယနေ့ခေတ် ဟာသစာရေးဆရာ အကြည်တော်၏ ကျွန်မမှ အင်္ဂလိပ်မှ မဟုတ်တာ မောင် ဆိုသော စာအုပ်ကို ဖတ်ဖူးသည်ဆိုသော် ကောင်းမြတ်တို့လိုမျိုး ဓါတ်ပုံဆရာတွေ ဘယ်လိုဓါတ်ပုံရိုက်သည်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားပေလိမ့်မည်။ ဝမ်းကွာတားအဆင်တွင် နှစ်ကုန်းတစ်ကော့ (ဒါမှမဟုတ်) နှစ်ကော့တစ်ကုန်း စတိုင်လ်တွေ ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ မြင်လိုက်တာနှင့် ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက် ဖြစ်စေသော ဓါတ်ပုံတွေ ထွက်လာလေ့ ရှိသည်သာ။
မနေ့ညက ဇွဲအိမ်ပြန်တာ နောက်ကျသည်။ ဘော့စ်ဖြစ်သူ ဦးမိုးလုံးဟိန်းကို ပါတီတစ်ခုသို့ လိုက်ပို့ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဦးမိုးလုံးဟိန်း အမြဲတမ်း သုံးနေကျ ဒါရိုက်ဘာက နေမကောင်းလို့ ဆိုပြီး ရှောင်တစ်ခွင် ခွင့်ယူသွားသဖြင့် သူဌေးလူယုံလိုလို၊ အပါးတော်မြဲလိုလို ဖြစ်နေသော ဇွဲက ဒါရိုက်ဘာလုပ်ကာ လိုက်ပို့ခဲ့ရသည်။ အထက်တန်းစားများသာ ဖိတ်ကြားဧည့်ခံသော ပွဲမို့ ဇွဲတစ်ယောက် နေရာ သိပ်မရ။ ပါတီကျင်းပရာ မြက်ခင်းပြင်၏ အစွန်တွင် ရှိသော ရေကူးကန်ဘက်တွင်သာ တစ်ယောက်ထဲ ငူငူငေါင်ငေါင်ထိုင်ကာ ယစ်ရွှေရည်လေး တစ်ခွက်ခြင်း သုံးဆောင်ရင်း အချိန်ဖြုန်းခဲ့ရသည်။ မျက်စိကတော့ ရွှေပွဲလာ ပရိတ်သတ်ထဲက ကောင်မလေးတွေ၊ ကောင်မကြီးတွေကို အမြည်းသဘောနှင့် သုံးဆောင်နေခဲ့သည်။ သို့သော် လှုပ်ရှားလို့ ရလောက်သည့် အကွက်တော့ မတွေ့ခဲ့ ..။
ပုံမှန်ဆို ဇွဲ .. ဒါမျိုးကိစ္စတွေကို ချောင်းဖို့ စိတ်မဝင်စားပါ။ ကောင်းမြတ်နှင့် စော်တစ်ဗွေ ဖြစ်သည့် ကိစ္စက အထူးတလေ ချောင်းနေစရာ မလိုအပ်ပေ။ သကောင့်သားက တခါတခါ သူတို့နှစ်ယောက်ခန်းတွင် သူရှိနေတာ မရှိနေတာတောင် ထည့်စဉ်းစားနေတာ မဟုတ်။ သူနှင့် အထာညက်နေသော စော်ကို ခေါ်ပြီး သူ့ဘက်ခြမ်းက အိပ်ရာပေါ်တွင် ဖြုတ်ချင်ဖြုတ်နေတာ ဖြစ်သည်။ တမင်တကာ ချောင်းစရာ မလိုဘဲ လှမ်းကြည့်လိုက်တာနှင့် မြင်နေရမြဲ။
တစ်ခုတော့ ရှိသည်။ ဇွဲနှင့် ကောင်းမြတ်က သိပ်ပြီးတော့ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အထာတွေ၊ အကန့်တွေ မရှိ။ ကောင်းမြတ်တစ်ကောင် ဇွဲရှိနေခိုက် အခန်းထဲ စော်ခေါ်သွင်းပြီး ဖိနေလို့လဲ (ငါ့ ကြောလှချည်လား)လို့ ဇွဲဘက်က မတွေး။ ထို့အတူ ကောင်းမြတ်နှင့် ညိနေသော စော်ကို ဇွဲက စိတ်ပါလို့ တက်ဖိလျှင်လဲ ဟိုကောင်က (ဒီငနာ ဖြတ်ခုတ်သွားတယ်)လို့ မတွေး။ ဆိုခဲ့သလို တခါတလေ နှစ်ယောက်ပေါင်းတောင် စော်ကို တက်ဆွဲချင် ဆွဲကြသေးတာမို့ သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်က Win – Win situation က များလေသည်။
(ဟိုက် .. မသာကောင် .. ဟုတ်လှချည်လား)
စတူဒီယိုခန်း၏ တံခါးက တမင်တကာပဲ ဖွင့်ထားတာလား၊ ပိတ်ဖို့ပဲ မေ့နေတာလား မသိ။ တံခါးရွက်က တစ်ဝက်သာသာလောက် ပွင့်နေသဖြင့် အခန်းထဲကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နေရသည်။ ထိုသို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပိုမြင်ရန် ထပ်ပံ့ပိုးနေသည်က ဓါတ်ပုံရိုက်ရာတွင် အသုံးပြုသော ဆလိုက်မီးကြီး နှစ်လုံးကို ကောင်းမြတ်က ဖွင့်ထားလို့ ဖြစ်သည်။ ဆလိုက်မီးထိုးထားသည့် ဇာတ်မင်းသားနှင့် မင်းသမီးကတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ရာတွင် သုံးတာလား၊ မသုံးတာလား မသိသည့် မို့ရာတစ်ခုပေါ်တွင် ဝတ်လစ်စလစ် ဝတ်စုံနှင့် လုံးထွေးနေသည်။
အခန်းတံခါးဘက်သို့ ကျောပေးပြီး လေးဘက်ထောက်ကာ ကုန်းပေးထားသော နွဲ့ဒါလီထံသို့ ဇွဲအကြည့်က အရင်ရောက်သည်။ မီးအလင်းအရောင်ကြောင့် အရှင်းသား မြင်နေရသော ပကတိတကိုယ်လုံးကို မျက်စိက စကန်ဖတ်သလို အသေးစိတ်ကြည့်မိသည်။ ကုန်းပေးထားသည့် ပိုစရှင်ကြောင့် လက်တစ်ဝါးအုပ်လောက် ရှိမည့် နို့လေးတွေက လုံးလုံးကျစ်ကျစ်နှင့် အောက်သို့ စူထွက်နေသည်။ အသက်ငယ်ငယ် အပျိုအရွယ်လေးမို့ တင်းတင်းရင်းရင်း ဖြစ်နေရာ အချို့သော အိမ်ထောင်သည် မိန်းမကြီးတွေလို စင်ထိုးထားသော ဗူးသီးတွေအလား တွဲကျနေတာမျိုး ဖြစ်မနေ။ နွဲ့ဒါလီ၏ ခါးလေးကလဲ သေးသေးသွယ်သွယ်လေး ဖြစ်ပြီး ကောင်းမြတ် မျက်နှာအပ်ထားသော တင်ပါးလေးတွေကမူ လုံးလုံးကော့ကော့လေး။
အရည်တွေတလက်လက်နှင့် စိုနေသော အဖုတ်ကြီးက တကယ်ကို မသေး။ ကာမဆိပ်တက်နေသည့် အချိန်မို့လား မသိ။ ဖောင်းကားကာ ပြူးထွက်နေသည်။ ရီဝေဝေနှင့် မှန်လာခဲ့သည့် ဇွဲတစ်ယောက် စိတ်တွေတောင် ဖျဉ်းခနဲ ဖြစ်သွားရသည်။ ကိုယ်အပူရှိန်က တမဟုတ်ခြင်း တက်လာပြီး ပေါင်ကြားက ဒုတ်က အလိုလို မာတောင်လာသည်။
“ကိုကောင်း .. အတတ်မဆန်းနဲ့ကွာ .. နော် နော် .. ရိုးရိုးပဲ လုပ်ပါ ..”
နွဲ့ဒါလီ၏ တင်ပါးနှစ်ဖက်နောက် နေရာယူပြီး ကောင်းမြတ်က သူ့ဒုတ်နှင့် လှမ်းထောက်လိုက်သည်ကို လှမ်းတွေ့လိုက်ရသည်။ ငနဲသားက ဖင်သားနှစ်ခြမ်းကို လက်ဖြင့် ကျကျနဖြဲထားရာ စအိုဝ နီနီလေးက တကယ်ကို စူစူပွပွလေး ဖြစ်နေသည်။ ဇွဲကိုယ်တိုင် ကောင်းမြတ်လို စော်တွေကို ဖင်ချလေ့ ရှိသူဖြစ်ရာ ဒီမြင်ကွင်းတွင် စိတ်တွေ ဆူဝေတက်လာသည်။ ဝတ်ထားသည့် စတိုင်လ်ဘောင်းဘီသားကို ထောက်၍ ကန်တက်လာသည့် သူ့ကောင်ကို လက်ဖြင့် လှမ်းအုပ်ကိုင်မိသည်။
“ဒါလီကလဲ .. ခနလေးပါ .. နဲနဲလေး စမ်းထည့်ကြည့်မယ် .. မခံနိုင်မှ ပြန်ထုတ်လိုက်မယ် ..”
“ဟင့်အင်းကွာ .. ဒါလီ ဖုတ်ဖုတ်ကိုပဲ လုပ်ပေးဦး .. နော် ကိုကောင်း .. နောက်မှ ..”
နွဲ့ဒါလီ အဖုတ်အနေအထားနှင့်က ကောင်းမြတ် လီးကို ကောင်းကောင်းခံနိုင်မှာ သေချာပါသည်။ ကောင်းမြတ်လီးက ပြောရမည်ဆိုလျှင် သိပ်အကြီးစားကြီးမှ မဟုတ်တာ။ သာမန်အရွယ်အစားလောက်ပဲ ရှိသည်။ အဲဒါကြောင့် ကောင်းမြတ်နှင့် ဖြစ်ပြီးသော စော်တစ်ချို့ဇွဲနှင့်ဆက်ဖြစ်လျှင် သူ့ဟာကြီးကို ပိုကြိုက်သွားကြတာ များသည်။ ကောင်းမြတ်ကတောင် တခါက နောက်တောက်တောက်နှင့် သူပြောဖူးသည်။ (ဟေ့ကောင် .. ဇွဲ .. မင်းချပြီးတဲ့ စော်ဆိုရင် .. ငါကတော့ ဖင်ပဲ ချချင်တော့တယ် .. အဖုတ်ကလုပ်လို့ မကောင်းတော့ဘူး) ဆိုပဲ ..။
နွဲ့ဒါလီ ကော့လန်ပျံကားပြီး အော်ညည်းနေတဲ့အသံနောက်မှ ကောင်းမြတ်တစ်ယောက် အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းနဲ့ အားကြိုးမာန်တက် ဆောင့်နေတဲ့ အသံတွေက ကပ်လျက်လိုက်ပါနေသည်။ ဒါမျိုး အလိုးအဆောင့်တွင်မူ ကောင်းမြတ်က ဆရာကျသည်။ သက်လုံကောင်းသည်။ မနားတမ်းပင် အချက် လေးငါးဆယ်လောက် အသာလေး ဆွဲနိုင်သည်။ အခုလဲကြည့်။ လီးတစ်ချောင်းလုံး သွင်းထည့်လိုက်၊ ဒစ်ပိုင်းလောက်ပဲ ကျန်အောင် ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်နှင့် အသားကုန်ကို ကျုံးနေသည်။ သေချာသာ ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား ထူထူကြီးနှစ်ဖက် သည် လီးတန်နှင့်အတူ လိပ်လိပ်၍ ဝင်သွားလိုက်၊ ပြန်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေသည်ကို မြင်ရမည်သာ။ အရည်ကြည်မြုပ် ဖြူဖြူတွေကတော့ ပြောမနေနှင့်တော့။ အောက်ကခံထားသော မို့ရာပေါ်သို့ တပေါက်ပေါက်နှင့်ပင် ကျနေသည်။
ကောင်းမြတ်တစ်ယောက် တရကြမ်းဆောင့်နေမှုကြောင့် နွဲ့ဒါလီက အရင်ပြီးသွားပုံရသည်။ တအားအားနှင့် ကုန်းအော်ပြီး ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျသွားတာ တွေ့ရသည်။ အဲဒီနောက် ကောင်းမြတ်က နှစ်ချက်သုံးချက် ထပ်ဆောင့်ပြီး သူ့ဒုတ်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ အမြုပ်ရည်တွေ ရွှဲနေသော အဖုတ်ဝက ဆောင့်ချက်ကြမ်းကြမ်းများကြောင့် အနည်းငယ်ပြဲလန်ပြီး ကျန်ခဲ့တာ တွေ့ရသည်။ ဇွဲကြည့်နေစဉ်မှာပင် ကောင်းမြတ်က သူ့ဒုတ်ကို ဖင်သားမြောင်းကြားပေါ် ထပ်တင်ပြီး လက်နှင့် ဂွင်းအဆက်မပြတ် တိုက်သည်။
လီးထုတ်၊ ဂွင်းတိုက်နေသည့် အဖြစ်ကို ကောင်းမြတ် မြင်သွားပြီဖြစ်သဖြင့် သောက်ရှက်တော့ ကွဲပြီဟုတွေးမိပြီး ဇွဲတစ်ယောက် မျက်နှာတွေ ထူပူသွားသည်။ ကမန်းကတမ်း လီးကို ဘောင်းဘီထဲ ပြန်ထည့်ပြီး ကိုယ့်အိပ်ခန်းဘက်သို့ ခပ်သုတ်သုတ်လျှောက်လာခဲ့သည်။ မျက်စိထဲတွင်တော့ သူ့အဖြစ်ကို ကြည့်ပြီး ပြောင်စပ်စပ်မျက်နှာနှင့် မခိုးမခန့် လှမ်းကြည့်နေသော ကောင်းမြတ်ပုံစံကို မြင်ယောင်နေသည် …။
လဒကောင် .. မသာဂျီး .. >:( >:(
စောင်ကိုဖယ်ပြီး အိပ်နေရာမှ ထထိုင်မှ သူမနိုးခင်ကတည်းက နိုးနေသော ဖွားဖက်တော်ကို သတိပြုမိသည်။ (နေပါဦး .. ညီလေးရာ .. မင်းအတွက် ဖြစ်လာမှာပေါ့) လို့ စိတ်ထဲက ပြောရင်း ရေချိုးခန်းဝင်ဖို့ သဘက်ဆွဲ ထွက်လာခဲ့သည်။ ကောင်းမြတ်၏ စတူဒီယိုခန်းနားရောက်လို့ အနည်းငယ် ဟတတဖြစ်နေသော တံခါးပေါက်ကိုအတွေ့၊ အထဲသို့ လှမ်းကြည့်လိုက်သည်တွင် မျက်လုံးပြူးစရာ မြင်ကွင်းကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ဆလိုက်မီးတွေ မပိတ်ဘဲ ထွန်းထားဆဲဖြစ်သော အခန်းထဲတွင် ကောင်းမြတ်က ရှိမနေပါ။ ညတုန်းက တွေ့ခဲ့ရသူ နွဲ့ဒါလီကတော့ ရှိနေသေးသည်။ သို့သော် ပုံမှန် အနေအထားနှင့် ရှိနေတာ မဟုတ်။ သစ်သားကုလားထိုင် တစ်လုံးတွင် တုပ်နှောင်ချည်ထားလျက်နှင့် ရှိနေတာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် နွဲ့ဒါလီ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ပုံမှန်အဝတ်အစားများ ရှိမနေဘဲ .. နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်ကားများတွင် မြင်ရလေ့ရှိသော လည်သာအနက်ရောင် ကိုယ်ကျပ်ဝတ်စုံကို Lingerie သဖွယ် ဝတ်ဆင်ထားသည်။ ခြေတန်နှစ်ဖက်အား ကုလားထိုင်၏ခြေထောက်နှစ်ဖက်နှင့် တွဲချည်ထားပြီး၊ လက်နှစ်ဖက်ကိုမူ ခေါင်းပေါ်က မြှောက်ကာ လက်နောက်ပြန်ချည်ထားသည်။ နွဲ့ဒါလီ၏ ပါးစပ်ထဲတွင်လည်း ဘောဂက်လို့ ခေါ်သည့် ကြိုးနှင့်ဆက်ထားသော ဘောလုံးအနက်လေးကို ထည့်ပိတ်ထားသည်။
ကောင်းမြတ် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးမှု တော်တော်များများကို မီးထိုးပြ၊ ဆက်တင်ပြင် ဘာညာ လိုက်လုပ်ဖူးလို့ ဇွဲတစ်ယောက် မော်ဒယ်လ်ဝတ်စုံတော်တော်များများ မြင်ဖူးပါသည်။ သို့သော် ဒီလိုမျိုး ကိုယ်ကျပ်သားရေအနက် ပုံစံ .. ခပ်ဟော့ဟော့ ဒီဇိုင်းမျိုးကိုတော့ မတွေ့ခဲ့ဖူးပါ။ ဒီဇိုင်းက မိုက်သည့်အပြင်၊ လက်နောက်ပြန်မြှောက်ပြီး ထိုင်နေရမှုကြောင့် ရင်ဆိုင်တွေက မို့ပြီးတော့ကို ကော့ထွက်နေသည်။ မြင်လိုက်တာနှင့် သွေးဆူဖွယ်ကောင်းအောင် ဆွဲဆောင်နေသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဇွဲ နေရာမှာ ဆက်ရပ်နေမိရာ အခန်းဝသို့ မျက်လုံးကစားနေသူ နွဲ့ဒါလီက မြင်သွားရှာသည်။ ဘာတွေမှန်း မသိအော်ပြီး သူ့ကို လှမ်းပြောနေသည်။
ဇွဲ အခန်းပတ်လည်ကို အရင်လှည့်ကြည့်သည်။ သေချာသည်။ ဟိုကောင် ကောင်းမြတ် ရှိမနေ။ ကြည့်ရတာ စောစောစီးစီး နိုးနေပြီး ရှူတင်ဝင်ဖို့လုပ်ရင်း ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာလို့ ထွက်သွားတာ ဖြစ်ရမည်။ ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်နေမိသည့် ဇွဲ၏ အတွေးက ညတုန်းက လူမိခံလိုက်ရသည့် အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်ရောက်သွားသည်။
စပ်ဖြီးဖြီး မျက်နှာအသွင် ပြောင်းသွားပြီးနောက် ဇွဲ အခန်းထဲသို့ ခပ်တည်တည် ဝင်လာသည်။ သူဝင်လာသည်ကို မြင်တော့ နွဲ့ဒါလီက အားတက်သွားဟန်နှင့် တဝူးဝူးတဝါးဝါး ထပ်ပြောသည်။ ဇွဲ ရှူးဆိုပြီး လက်ညိုးတစ်ချောင်းထောင် နှုတ်ခမ်းနားကပ်ကာ လုပ်ပြလိုက်သည်။ နွဲ့ဒါလီ အသံလေး တိတ်သွားပြီး သူမ ဘေးနားရောက်လာသည့် ဇွဲအား အားကိုးတကြီး မျက်နှာနှင့် မော့ကြည့်သည်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားဟန် ရှိသော ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာလေးက မီးအလင်းရောင်ကြောင့် ဝင်းဝင်းလေး ဖြစ်နေသည်။
ဇွဲ ဒီစကားပြောပြီးနောက် နွဲ့ဒါလီ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်သည်။ သူထင်ထားသလို နွဲ့ဒါလီက ခေါင်းကို သာသာလေး ညိတ်ပြသည်။ ဒီလောက်ဆို မဆိုး။ ရှေ့ဆက်တက်ဖို့ ရနိုင်သည်ဆိုတာ ဇွဲ ရိပ်မိလိုက်သည်။ အပေါ်စီးမှ ငုံ့ကြည့်နေသဖြင့် ရင်စီးနေရာအထက်ပိုင်းတွင် ဝင်းစိုနေသော နို့လုံးဖွေးဖွေးတို့၏ ထိပ်ပိုင်းအား လှမ်းမြင်နေရသည်။ ဇွဲတစ်ယောက် မျက်နှာက ပြုံးဖြီးဖြီး ဖြစ်သွားပြီး လက်က မို့မောက်နေသည့် ထိုအပိုင်းအား လှမ်းကိုင်လိုက်သည်။
စကားပြောနိုင်သွားသည်နှင့် နွဲ့ဒါလီ သူ့အား အပြေးအလွှား ပြောရှာသည်။နွဲ့ဒါလီ ဓါတ်ပုံလာရိုက်သည့် တစ်ရက်က ဇွဲက ကောင်းမြတ်ကို ၀ိုင်းကူပေးထားသဖြင့် သူ့တို့သိနေကြတာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဇွဲက နွဲ့ဒါလီ စကားကို ဂရုစိုက်မနေ။ သူ့မှာလဲ သူ့အကြံနှင့်သူ။ ညတုန်းက ခပ်လှောင်လှောင် မျက်နှာပေးနှင့် ကြည့်သွားသော ကောင်းမြတ်ကို ပညာပေးရမည်။
“မသွားနဲ့ .. ကိုဇွဲ .. တကယ်ပဲ .. စိတ်ညစ်တယ်နော် .. လာ .. လာခဲ့ … လူကို အနိုင်ကို ကျင့်တယ် .. ဟွန်း”
လီးဒစ်အောက်က မေးသိုင်းကြိုးနေရာလေးအား လျှာဖျားလေးနှင့် ပွတ်တိုက်ခံရသည်တွင် ဇွဲတစ်ယောက် ခြေဖနောင့်တွေပင် ကြွတက်သွားရသည်။ နွဲ့ဒါလီက သူမခေါင်းကို ရှေ့နောက်လှုပ်ရှားရင်း လီးကို အဝင်အထွက်ဖြစ်အောင်လုပ်သည်။ ကောင်းချက်ကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့ .. နွဲ့ဒါလီ ကြည့်ရတာ ပလွေပညာကို တော်တော်အဆင့်မြင့်မြင့် တတ်မြောက်ထားပုံရသည်။ အသက်ကလေး ငယ်ပေမယ့် ပညာကမငယ်။ ပါးကလေးများ ပိန်လိုက်၊ ဖောင်းလိုက် ဖြစ်လာသည်အထိ ကြိုးစား စုပ်ပေးသလို၊ လျှာကလေးကို ကောင်းကောင်း အသုံးချပြီး လီးကို ကလိနေသည်။ ဇွဲတစ်ယောက် ကိုယ်ကို မနည်းပင် မတ်မတ်ရပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားထားရသည်။
လက်တစ်ဖက်က နွဲ့ဒါလီ၏ ခေါင်းအား ထိန်းကိုင်ပြီး သူမပါးစပ်ကို အောက်သို့ပိုဖိချမိသလို၊ ကျန်တစ်ဖက်နှင့်လဲ နက်ပြောင်နေသော သားရေသားအောက်မှ မို့မောက်နေသည့် ရင်သားလုံးလုံးတစ်ဖက်ကို လှမ်းဆွဲသည်။နို့သီးရာလေး ထင်းနေသည့် နေရာကို လက်ဖြင့်အုပ်ပြီး လက်ညိုး လက်မသုံးကာ ဖိချေပေးလိုက်သည်။
အဓိက အချက်နေရာကို အဆွခံရတော့ နွဲ့ဒါလီလဲ သွေးသားတွေ ဆူပွက်လာရသည်။ အစတုန်းကတော့ ထိုင်ခုံမှာ တုပ်နှောင်ပြီး ချည်ထားခံခဲ့ရသော ဘဝက လွတ်ချင်လို့။ အခုတော့ သူမကိုယ်တိုင် လီးစုပ်ရတာကို အရသာတွေ့သထက်တွေ့နေသည်။ လက်နှစ်ဖက်၊ ခြေနှစ်ဖက် မလှုပ်နိုင်သည်ကိုတောင် မေ့ပြီး၊ လှုပ်နိုင်သည့် ပါးစပ်ကို သုံးပြီး အားရပါးရ ထပ်စုပ်သည်။ ဇွဲဟာကြီးကလဲ တကယ်ကို အားရလောက်အောင် ကြီးသည်မို့ သူမ စိတ်တွေဆူဝေပွက်သည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးကလဲ ဖောင်းတက်ပြီး အရည်ကြည်တွေ အလိုလို စို့လာရှာသည်။
အိနွေးပူစက်သည့် နွဲ့ဒါလီ၏ ပါးစပ်အတွင်းသားလေးများက ပေးသည့် အရသာကို မခံနိုင်တော့သည့်အဆုံး ဇွဲတစ်ယောက် ကျော့ကော့၊ ဖင်ကော့ တက်သွားသည်။ လီးကြီးက ဖောင်းကားတက်ပြီး ထိပ်ဝကနေမူ သုတ်ရည်ပူတွေ ပန်းထုတ်မိသည်။ နွဲ့ဒါလီကိုယ်တိုင်လဲ လည်ချောင်းထဲကို ထိုးကျလာသော သုတ်ရည်ပျစ်ပျစ်များကြောင့်၊ စိတ်ထဲတွင် ပေါက်ကွဲထွက်ပြီး အဖုတ်ကနေ အရည်ကြည်တွေ စိမ့်ကျသည်။ သူမကိုယ်သူမ သတိမထားမိခင်မှာပင် အသေးစား ကလိုင်းမက်စ်တစ်ခုကို ခံစားလိုက်ရသည်။
“ဒါ .. ဒါဆို ဒီဟာတွေ ဖြေပေးဦး .. ကောင်းမြတ်က ဘာမှန်း မသိဘူး .. ဓါတ်ပုံဆန်းဆန်းရိုက်ရအောင် ပြောပြီး သူများကို ခုံမှာ ချည်သွားတယ် ..”
“အာ .. ဆောရီး … ဒါလီ .. ကိုယ် ရုံးသွားဖို့ အချိန်နောက်ကျနေပီ .. ပြေးရဦးမယ် … နောက် .. နောက်မှနော် ..”
“ဟင် !! .. ဇွဲ .. ဇွဲ .. ခင်ဗျား .. ဒါဘာလုပ်တာလဲ ??? >:( >:(“
အခန်းဝသို့ လှည့်ထွက်ဖို့ ခြေလှမ်းပြင်လိုက်သော ဇွဲကို နွဲ့ဒါလီက အသံစူးစူးနှင့်အော်ကာ လှမ်းမေးသည်။ သူမကိုယ်ကို လှုပ်ခါပြီးလဲ ရုန်းသည်။ ထိုင်ခုံနှင့် ကြမ်းပြင်ဆောင့်သံ တဒုန်းဒုန်း ထွက်လာသည်။ ဇွဲ နွဲ့ဒါလီအား လှည့်ကြည့်၍ ရှူးဆိုပြီး လုပ်ပြသည်။ သူမနားသို့ ပြန်ရောက်လာပြီး ခုနက ကြမ်းပြင်ပေါ် ပစ်ချထားသော ဘောဂက်ကို ပြန်ကောက်ယူသည်။
ဇွဲ ရုံးတက်ရသည့်နေရာက မြို့ လည်ခေါင်ရှိ အဆင့်မြင့်အဆောက်အဦးကြီး၏ ၁၅ထပ်မြောက် အလွှာတွင် ဖြစ်သည်။ ဦးမိုးလုံးဟိန်းက သူ၏ အဓိက ရုံးခန်းအဖြစ် အဆိုပါအဆောက်အဦးကြီး၏ ၁၅ထပ်တစ်ခုလုံးကို အပိုင်စီးထားသည်။ ဒီလောက်ဆိုလျှင် ဇွဲ၏ သူဌေး ဦးမိုးလုံးဟိန်းရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို စာဖတ်သူ အနည်းငယ် မှန်းဆမိမည် ထင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ဦးမိုးလုံးဟိန်းသည် မြန်မာပြည်၏ နာမည်ကျော် သူဌေးကြီးများထဲမှ တစ်ဦးအပါအဝင် ခရိုနီ အကြီးစား တစ်ယောက် ဖြစ်လေသည်။
ရုံးအဆောက်အဦးရှိရာ အောက်ထပ်ရှိ ရုပ်ရှင်ရုံနားရောက်တော့ မနက်ဘက် သူလုပ်နေကြ ထုံးစံအတိုင်း Bakery ဆိုင်မှာ ကော်ဖီနှင့် မုန့်ဝင်ဝယ်သည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဝယ်နေကြ ဖြစ်လို့ အရောင်းကောင်တာမှ ကောင်မလေးများနှင့်တောင် ဇွဲ တော်တော်သိနေပြီ ဖြစ်သည်။ (ကိုဇွဲ .. ထုံးစံပဲ မှတ်လား)ဆိုပြီး လှမ်းမေးသည့် ကောင်မလေးကို (ဟုတ်တယ် .. အသဲလေးရယ်) လို့ ခပ်နောက်နောက် ဖြေလိုက်သည်။ ကောင်မလေးက ဟွန်းဆိုပြီး မျက်စောင်းထိုးပေမယ့် မျက်ဝန်းများကမူ ပြုံးစစ ဖြစ်နေသည်။ အသဲလေးဟု ခေါ်လိုက်သော ထိုကောင်မလေး နာမည်က သဲသဲချိုဆိုတာ ဇွဲသိနေခဲ့သည် မဟုတ်လား ..။
ဘော့စ် ဆိုပြီး ခေါ်ရသော ဦးမိုးလုံးဟိန်းသည် အသက်အားဖြင့် လေးဆယ်ကျော် အရွယ်လောက်ရှိသည်။ ဇွဲနှင့်ဆိုလျှင် နှစ်၂ဝနီးပါးလောက် ကွာဟသည်။ သို့သော် ဦးမိုးလုံးဟိန်းက သူဌေးပီပီ သူ့ကိုယ်သူ အမြဲရှိုင်းနေသူမို့ နုပျိုနေသည့်ဟန် ပေါက်သည်။ ဆိုးဆေး သုံးထားမှုကြောင့် ဆံပင်ဖြူရယ်လို့ မရှိသော ခေါင်းက အမြဲနက်မှောင်ပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိသည်။ ပင်ကိုယ်ရုပ်သန့်သော ဦးမိုးလုံးဟိန်းသည် အဆင့်မြင့်မြင့် ဝတ်စားဆင်ယူမှုနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ တကယ်ကို လူကြီးလူကောင်း ဂျန်တမန်း စတိုင်ထွက်နေသည်။ ထို့ကြောင့်ပဲလား မသိ .. ဦးမိုးလုံးဟိန်းတွင် အခြား ယောက်ျားသားများ အားကျချင်စရာကောင်းသော ဇာတ်လမ်းတွေက များလှလေသည်။
ဇွဲတစ်ယောက် ဦးမိုးလုံးဟိန်းထံတွင် အလုပ်ဝင်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကျော် ကာလတွင် သူ့ဘော့စ် ပတ်သက်ခဲ့သော မိန်းမတွေက မနည်းလှပါ။ အကြိမ်တိုင်း အကြိမ်တိုင်းတွင် သိလာခဲ့ရသော မိန်းကလေးများသည် တရုတ်စကားပုံ တစ်ခုအတိုင်း တောင်တစ်လုံးထက် တစ်လုံးပိုမြင့်သလိုမျိုး တင်စားလို့ရနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ ရှေ့ကတစ်ယောက်ထက်၊ နောက်ပေါ်လာသည့် တစ်ယောက်က ပိုချော၊ ပိုလှနေလို့ဖြစ်သည်။ လက်ကီးဘတ်စတတ်ဆိုသော အသုံးအနှုန်းသည် ဦးမိုးလုံးဟိန်းကို ရွေး၍ ပြောထားဟန် ရှိသည်။
သို့သော် တကယ်တမ်း ပြောရမည်ဆို ဦးမိုးလုံးဟိန်းကို ဇွဲ လုံးလုံး နားမလည်နိုင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသော် သူဌေးကတော် ဖြစ်သူ ဒေါ်နန်းယမုံကို ဇွဲတစ်ယောက် ကောင်းကောင်း သိနေလို့ ဖြစ်သည်။ မိုးကုတ်သူ ကျောင်းတွင်းပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်သော သူဌေးကြီးတစ်ဦး၏ တစ်ဦးတည်းသော သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်နန်းယမုံသည် ဇွဲအမြင်တွင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျက်သရေ အရှိဆုံး၊ ဆွဲဆောင်မှု အရှိ်ဆုံး၊ အချောမောဆုံးဟု ဆိုရမည့်သူ ဖြစ်သည်။
ငယ်ငယ်ကတည်းက ခြေမွေးမီးမလောင်၊ လက်မွေးမီးမလောင် နေလာခဲ့ရသူ ဖြစ်သည့်အပြင်၊ ဇွဲ သိထားသည့်အချက်အရ ယောဂလဲ အမြဲလေ့ကျင့်သည်ဆိုသော ဒေါ်နန်းယမုံသည် တကိုယ်လုံး အချိုးအစားပြေပြစ်ကာ ကြည့်လို့ကောင်းလှသည်။ အခုခေတ် ချာတိတ်မလေးမျိုးလို ပိန်ပိန်လှီလှီ သေးသေးကွေးကွေးလဲ မဟုတ်။ ငါးပေခြောက်လက်မဆိုသော အရပ်နှင့် လိုက်ဖက်ညီသော အချိုးစားကျနသည့် ကိုယ်လုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အလုံးစုံကို ချုံငုံ၍ ပြောလိုက်ရလျှင် နန်းယမုံသည် နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Charlize Theron နှင့် နင်လားငါလား ချောမောသူပင်။ ဆံပင်အရောင်လေးသာ ရွှေအိုရောင် ဆိုးလိုက်လျှင် မြန်မာပြည်ရဲ့Charlize Theron လို့ ဆိုလို့ရနိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်လဲ ဇွဲ .. သူ့ဘော့စ်ဖြစ်သူကို နားမလည်နိုင်တာဖြစ်သည်။ သူသာ ဦးမိုးလုံးဟိန်းနေရာမှာ ဆိုလို့ကတော့ ဒေါ်နန်းယမုံနှင့် ဖက်အိပ်ပြီး တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးအောင် လိုးနေမိမှာ သေချာပါသည်။
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဇွဲ သူ့ဘော့စ်ကို မကြည်သည်က နောက်တိုးစပွန်ဆာ ကိစ္စတစ်ခုက သူနှင့် တိုက်ရိုက် ပတ်သက်လာလို့ ဖြစ်သည်။ ဦးမိုးလုံးဟိန်းက လက်ရှိ ရှိနေသော စပွန်ဆာကောင်မလေး တစ်ယောက် အပြင်၊ သိပ်မကြာသေးခင်က Miss ဘွဲ့ရခဲ့သော ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို စပွန်ဆာ ထပ်ပေးသည်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆို ဇွဲ ဘာမှ ပြောမိမှာ မဟုတ်သော်လည်း .. ခက်သည်က အဲဒီတစ်ယောက် စပွန်ဆာကိစ္စကို သူက လိုက်ဖန်တီးပေးရတာ ဖြစ်သည်။ နောက်ပြီး ဖြစ်ချင်တော့ ချောချောငယ်ဆိုသော အဲဒီအသစ်တစ်ယောက်သည် သူ့ရည်းစားဟောင်း နီနီခိုင်မာနှင့် သူငယ်ချင်း ဖြစ်သည်။ ဇွဲတို့ ကျောင်းထဲက ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ ပြောရလျှင် ဇွဲအတွက် မျက်နှာပူစရာလိုလို၊ မျက်နှာနာစရာလိုလို ခံစားခဲ့ရသည်။ ချောချောငယ် ကိစ္စအတွက် သူလိုက်လုပ်ပေးရတာ တကယ်ကို မကျေနပ် ..။ သို့သော် သူ့မှာ No Choice !!
ဝယ်လာသည့် ကော်ဖီလေး ကုန်ခါနီးသည့် အချိန်တွင် ဦးမိုးလုံးဟိန်း ရုံးခန်းထဲ ဝင်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမြဲတမ်း ကျော့ကျော့မော့မော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့် တွေ့ရလေ့ရှိသော ဦးမိုးလုံးဟိန်း .. ဒီနေတော့ ဖိုသီဖတ်သီ ဖြစ်ကာ ကို့ရိုးကားရား ပုံစံပေါက်နေသည်။ ဇွဲသည်ပင် အံ့အားသင့်မိသည်မို့ ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်နေရာမှ ထ၍ နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။
လေသံတင်းတင်းနှင့် ပြောပြီး သူ့ရုံးခန်းဘက်လှည့်ထွက်သွားသော ဦးမိုးလုံးဟိန်းကြောင့် ဇွဲ စိတ်တွေ စနိုးစနောင့် ဖြစ်မိသည်။ မနေ့ည ပါတီမှာတုန်းက အကောင်းကြီး။ အခု မနက်ကျတော့ ပုံစံက ညတုန်းကနှင့် မတူ။ ဘာများ ဖြစ်လာတာပါလိမ့်။ ဇက်ကလေးပုပြီး ကိုယ်ကိုယို့ကာ ဘော့စ်နောက်မှ ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်လာခဲ့သည်။
အခန်းထဲရောက်လို့ ဦးမိုးလုံးဟ်ိန်းက လက်ဟန်နှင့် တံခါးပိတ်ခိုင်းလိုက်သည်တွင်၊ ဇွဲ ပိတ်လိုက်ပြီးနောက် အခန်းအလယ်ရှိ စားပွဲရှေ့က ခုံတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ဦးမိုးလုံးဟိန်းက တခြားဘက်ရှိ သူ့နေရာတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး စိတ်ရှုပ်ထွေးဟန်နှင့် စပြောသည်။
“ငါပြောတာ သေချာနားထောင် … ချောချောဆီ သွား .. ပြီးရင် သူနဲ့မင်း သမီးရည်းစားတွေလို ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ ..”
“ဟုတ်တယ် .. မင်းက ချောချောရည်းစား .. ဒီမှာကွာ ငါပြောပြမယ် .. ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုသိသွားမှန်း မသိဘူး .. ငါ့မိန်းမက ငါနဲ့ချောချော တွဲနေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ရထားတယ် .. ဟိုလိုပုံတွေတော့ မဟုတ်ဘူး .. ရိုးရိုးပုံတွေပဲ .. ဒါပေမယ့် ဒါတွေပြပြီး ညတုန်းက ငါ့ကို ရစ်တာ အသည်းအသန်ပဲ .. အဲဒီတော့ မင်းက ချောချောနဲ့တွဲပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ထားလိုက် .. ငါ့မိန်းမ မေးလာရင် မင်းရည်းစားလို့ ဖြေလိုက် .. ငါနဲ့က မင်းဆီလာလည်ရင်း သိသွားတာလို့ ဖြေပေးလိုက် .. တခြားဘာမှ မဟုတ်ဘူး .. တစ်ခါနှစ်ခါ စကားပြောဖူးတယ်ပေါ့ .. ဒါဆို သူယုံသွားလိမ့်မယ် .. ဟုတ်ပြီလား ..”
ဒီတော့မှပဲ အကြောင်းရင်းကို လိပ်ပတ်လည်အောင် ဇွဲ နားလည်လိုက်သည်။ လက်စသတ်တော့ သူ့ကို ဓါးစာခံအဖြစ် သုံးနေတာကိုး။ ဓါးခုတ်ရာ လက်ဝင်လျှိုခိုင်းတာနှင့် မထူး …။
ဦးမိုးလုံးဟိန်း၏ လူလည်ကျမှုကို ဇွဲ သိပ်မကျေနပ်။ သို့သော် အတင်းအကြပ်ကြီးလဲ ငြင်းဆန်လို့က မဖြစ်။ ဒီလူက မကျေနပ်လို့ အခုချက်ချင်း အလုပ်ထွက်ဆိုလျှင် သူ့ခမျာ တခြားလခကောင်းသော အလုပ်ရှာဖို့က လွယ်လှသည် မဟုတ်။ နောက်ပြီးတော့ အခုအချိန်ပိုင်းက တကယ့် အချိန်ကြီး။ နှစ်ကုန်ခါနီးပြီဆိုတော့ ဒီလကုန်မှာ ရမည့် ဘောနပ်စ်ကို မျှော်နေရသေးသည် မဟုတ်လား။ တော်ကြာ အလုပ်ပြုတ်သွားလို့ လခမရသည့်အပြင် မြိုးမြိုးမြက်မြက်လေး ရနိုင်သော ဘောနပ်စ်နှင့် လွဲသွားလျှင် အခက် ..
“ဟုတ် .. ဟုတ်ကဲ့ .. ဘော့စ်” (နှုတ်က လက်ခံသည့် သဘောထွက်လိုက်ပေမယ့် ဇွဲ၏ မျက်နှာက ရှုံ့တွနေသည်)
“အေး .. တကယ်လို့ အရမ်းကြီး အချေအတင် ဖြစ်လာရင်တော့ မင်းနဲ့ ချောချော ကို ငါတို့နှစ်ယောက်နဲ့ ချိန်းပြီး တစ်နေရာမှာ တွေ့လိုက်မယ် .. ငါ့မိန်းမ အထင်လွဲမှာ စိုးလို့ ဖြေရှင်းပြတဲ့ သဘောပေါ့ .. အဲဒီလောက်ဆို ယမုံက ယုံမှာပါ .. မင်းကို သူသိနေတာပဲ”
“ဟွကောင် .. တော်တော် … ထပ်မပြောနဲ့ .. မင်းနဲ့ငါနဲ့ ညှိနှိုင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး .. ငါ့မိန်းမ မေးရင် မင်းနဲ့ ချောချောက ရည်းစားလို့ ဖြေ .. ဒါပဲ … သိပြီလား !!!”
ဒေါသထွက်ကာ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနှင့် အော်လိုက်သည့် ဦးမိုးလုံးဟိန်းကြောင့် ဇွဲတစ်ယောက် ဇက်ကလေး ပုသွားရှာသည်။ မတတ်နိုင်။ သူ့ဆန်စားမှတော့ ရဲယုံပဲရှိတော့သည်။ နောင်ကိစ္စ နောက်ကျမှပဲ ရှင်းတာပေါ့။ ဦးမိုးလုံးဟိန်းက ဇွဲပုံစံကို ကြည့်ပြီး နောက်ဆုံးပိတ်လက်နက်ကို ထုတ်သုံးပြန်သည်။
“ငါ မှာလိုက်မယ်နော် ဇွဲ .. ချောချောနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် လိုတာထက် မပိုစေနဲ့ .. တစ်ခုခု သတင်းပြန်ကြားရင် မင်း ငါ့အကြောင်း သိတယ်နော် ..”
ဇွဲတစ်ယောက် ပါးစပ်ကနေ ဖြေရှင်းလိုက်ရင်း အခန်းထဲမှ ခပ်သုတ်သုတ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သူ အခန်းထဲက မထွက်ခင်မှာပင် ဘော့စ်ဖြစ်သူ၏ ချွဲပစ်နေသော လေသံကို ကြားဖြစ်အောင် ကြားလိုက်ရသေးသည်။ (ခေး .. နိုးပြီလား .. မောနင်း)ဆိုသည့် အသံ။ နားကလော်ဖွယ် ကောင်းလှသည့်မို့ သောက်မြင်ကပ်ကပ်နှင့် စိတ်ထဲကနေ ကျိန်ဆဲမိသည်။ သေနာဂျီး .. အဲဒီလောက် လီးသရမ်းနေတာ အေကိုက်ပါစေ .. တော် .. ဟွင်း .. ဟွင်း >:(
ရုံးခန်းထဲမှ ထွက်လာပြီးနောက် အဆေက်အဦးအောက်ထပ်သို့ ဓါတ်လှေကားဖြင့် ဆင်းလာခဲ့သည်။ ရုံးရှေ့ရောက်တော့ ချောချောငယ်ဆီ ဘယ်လိုသွားရရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားလိုက်သည်။ ချောချောငယ်က မြေနီကုန်းဘက်တွင် နေသည်မို့ ဇွဲတို့ ရုံးခန်းကနေ လိုင်းကားစီးသွားလို့ရသည်။ နောက်တော့မှ ဘော့စ်ခိုင်းလို့ သွားရတာပဲဟု အတွေးပေါက်ပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းက လာနေသည့် တက်စီတစ်စီးကို လက်ပြလိုက်သည်။ ဟုတ်သည်လေ .. ဓါးခုတ်ရာ လက်ဝင်လျှိုရမည့်သူ .. ဒီလောက်တော့ သုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဇွဲတွေးလိုက်သည်။
(မြေနီကုန်းက xxx ကွန်ဒိုကို ပို့ပေးပါ) ဟု ကားသမားကို ပြောပြီးနောက် ဇွဲ နောက်ခန်းကနေ အငြိမ့်သား ထိုင်လိုက်လာခဲ့သည်။ လမ်းဘေးဝဲယာကို ဟိုငေးဒီငေးကြည့်ရင်း လိုက်ပါလာသည့် ဇွဲ .. သူ့အတွေးတွေက ချောချောငယ်ဆီသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။
ဇွဲ .. ချောချောငယ်ကို ကောင်းကောင်းသိသည်။ သူ့ရည်းစားဖြစ်သူ နီနီခိုင်မာနှင့် သူငယ်ချင်း ဖြစ်လို့သာမက၊ ချောချောငယ်သည် နီနီခိုင်မာလိုပဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့၊ အိုက်တင်ထုတ်ဖို့ ၀ါသနာပါသူ ဖြစ်သည်။ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ကောင်းမြတ်နှင့်တောင် ချောချောငယ် သိသေးသည်။ သို့သော် နီနီခိုင်မာနှင့် ဇွဲ ညက်သွားပြီးနောက်ပိုင်း ချောချောငယ်နှင့် သူ .. သိပ်ပတ်သက်ခြင်း မရှိခဲ့။ အဲဒါကြောင့် ချောချောငယ် ဘာလုပ်၊ ဘာကိုင်နေသည်ကို ဇွဲ သေချာ မသိခဲ့။ နီနီခိုင်မာနှင့် ပြတ်သွားသည့် အချိန်တွင် ချောချောငယ်နှင့် ကျောင်းထဲမှာ တစ်ခါနှစ်ခါ ဆုံသေးသည်။ သို့သော် တစ်ခွန်းစ၊ နှစ်ခွန်းစ နှုတ်ဆက်ယုံတင် မပိုခဲ့။ ကျောင်းပြီးလျှင် တွေ့စရာလည်း မရှိတော့ဟု ထင်ထားခဲ့သည်။
တကယ်တမ်း ပြန်တွေ့ရပြန်တော့ ချောချောငယ်၏ အနေအထားက ဘယ်လိုမှ ထင်မှတ်မထားသည့် အခြေအနေ။ နာမည်ကြီး ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင် ချောချောငယ် Miss အဖြစ် အရွေးခံရသည်က ဇွဲအတွက် ထူးခြားသော အကြောင်းတရား မဟုတ်။ အရပ်ရှည်ရှည်တွင် ဖြောင့်စင်းသွယ်တန်းသော ခြေတံတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော ချောချောငယ်သည် ကြည့်လိုက်တာနှင့် မော်ဒယ်ရုပ် ထွက်နေသည့်သူ။ မော်ဒယ်တစ်ယောက် အသာလေး ဖြစ်နိုင်သော ချောမောသည့် ရုပ်ရှည်ကိုလည်း ချောချောငယ်ဆိုသော နာမည်နှင့်လိုက်အောင် ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဒီတော့ ၂၀၁၅အတွက် ဘာMiss .. ညာMiss ဆိုတာ အံ့သြစရာ ကိစ္စမဟုတ်။ အံ့သြဖို့ ကောင်းသည်က သူ့ဘော့စ် ဦးမိုးလုံးဟိန်းက ဒါလေးကို စပွန်ဆာ ပေးထားပြီး .. ချောချောငယ်ကလည်း စပွန်ဆာ ကျိတ်ပြီး လက်ခံထားသည့် အဖြစ်သာ။
“ဟင် .. ဗျာ .. ဘာညှော်လို့လဲ .. ကျနော်တော့ ဘာအနံ့မှ မရပါဘူး”
ချောချောငယ်တစ်ယောက် ရင်တွေတုန်နေသလို ဇွဲကိုယ်တိုင်လည်း ရင်တွေတုန်သွားသည်။ သူ ရင်တုန်ရခြင်းက ချောချောငယ်သည် သူမအိမ်ကနေ ကမန်းကတမ်းများ ထွက်လာသည်လား မသိ။ အိမ်နေရင်းအဝတ်အစားလို့ ဆိုရမည့် ချည်သားဂါဝန်ပါး တစ်ထည်သာ တစ်ခုတည်းသော အဝတ်အစားအဖြစ် ဝတ်ဆင်ထားသည်။ ဂါဝန်က ကြိုးတစ်ချောင်းဖြစ်သည့်အတွက် ရင်ဘတ်အပေါ်ပိုင်းက ရှင်းလင်းနေရာ၊ အောက်ခံဘရာကြိုး အနက်ရောင်လေးသာမက မို့မို့ဝင်းဝင်း ရင်သားအပေါ်ပိုင်းတွေပါ မြင်နေရသည်။ နို့လုံးလုံးဖွေးဖွေးနှစ်ခုကြားက အလယ်မြောင်းနေရာသည်လဲ ပစ္စည်းရှိ လူတန်းစားဖြစ်သည့်အလျောက် ထင်းခနဲကို လှစ်ဟပြနေရှာသည်။
ဦးမိုးလုံးဟိန်းထံတွင် တခြားစပွန်ဆာကောင်မလေးတွေ ရှိသော်လည်း ချောချောငယ်က သူနှင့် ပတ်သက်နေသည်မို့ တခါတလေတော့လဲ ဇွဲ သူမကို သနားမိသည်။ တခါတလေတော့လဲ သူမကို အားကျမိသည်။ သိန်းဂဏန်းအားဖြင့် ထောင်ကျော်တန်မည့် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပြင်၊ လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးဆိုပြီး မှန်မှန်ရနေသည့် ဘဝ။ ဒီကြားထဲ အခြေအနေပေးရင် ပေးသလို နိုင်ငံခြားထွက် ရှော့ပင်းပတ်တာက ရှိသေးသည်။ သာယာလိုက်တဲ့ ဘဝ ..။ တောက် .. ငါလဲ စပွန်ဆာ ရှာဦးမှပဲ .. ဒေါ်နန်းယမုံက ငါ့စပွန်ဆာပေးလို့ကတော့ မူတောင် မူမနေဘူး .. ချက်ချင်း ခေါင်းညိတ်ပစ်လိုက်မှာ ..
ချောချောငယ်၏ စကားကြောင့် ဇွဲ သူလာရင်း ကိစ္စကို သတိရသွားသည်။ အချိန်ဖြုန်းနေလို့ မဖြစ်။ မြန်မြန်ပြီး မြန်မြန်ပြန်မှ။ တော်ကြာနေ ချောချောငယ်နှင့် နှစ်ယောက်ထဲ ဘာဖြစ်လို့ ကြာနေလဲဟု ဦးမိုးလုံးဟိန်းက လိုက်ရစ်နေဦးမည်။ သူ့ဘောင်းဘီထဲက ဖုန်းကို ထုတ်ပြီး ချောချောငယ်အား သူတို့နှစ်ယောက်အတူ သမီးရည်းစားအဖြစ် ဟန်ဆောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရမည့်အကြောင်း ရှင်းပြလိုက်သည်။ ဒေါ်နန်းယမုံ၏ လက်မှ လွတ်ဖို့ ဒီကိစ္စက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုလည်း ရှင်းပြလိုက်ရာ ချောချောငယ်က မဆိုင်းမတွပင် လက်ခံသည်။ နှစ်ယောက်အတူတွဲ ဆယ်ဖီရိုက်ဖို့ ဇွဲထိုင်နေရာ ဆိုဖာသို့ သူမ ပြောင်းပြီးလာထိုင်သည်။
လူချင်း ပူးကပ်သွားပြီး ချောချောငယ်က သူ့ဘက်သို့ လှည့်ပြီး လေသံတိုးတိုးနှင့် မေးသည်။ ရုတ်တရက်တော့ ဇွဲ ချောချောငယ်ကို အဖြေပြန်မပေးနိုင်။ သူ့အကြည့်တွေက နီးကပ်စွာ ရှိနေသော ချောချောငယ်၏ မျက်နှာလှလှလေးကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ အထူးသဖြင့် ဆေးမဆိုးဘဲနှင့် သန္တာရောင်တောက်နေသော နှုတ်ခမ်းလေးတွေ။ အင်း .. ဒီ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ဖိပြီး နမ်းလိုက်ရရင် ..
သူ့ပုခုံးကို ပုခုံးချင်းတိုက်ကာ ချောချောငယ် မူနွဲ့နွဲ့နှင့် ပြောမှ ဇွဲတစ်ယောက် အတွေးအိပ်မက်မှ နိုးပြီး ကမန်းကတမ်း ပြောရရှာသည်။ ချောချောငယ် သူ့စကားအတိုင်း လူချင်းထိစပ်အောင် တိုးထိုင်လိုက်သောအခါ သဏ္ဍာန်လုပ် သရုပ်တူအောင် ဖက်မယ်နော်ဆိုပြီး ခွင့်တောင်းလိုက်သည်။ ချောချောငယ်က ဖက်လေဟု နွဲ့ကာ အပြောတွင် လက်တစ်ဖက်ကို သူမ ပုခုံးပေါ်ကျော်၍ ဖက်လိုက်သည်။ ချောချောငယ်က သူ့ရင်ခွင်ထဲပါကျလာသလို၊ သူ့လက်ကလဲ အကာအကွယ်မဲ့သော လက်မောင်းသားတစ်ဖက်ကို စမ်းမိသည်။
“ဆယ်ဖီ ရိုက်မယ်နော် .. ချောငယ် .. ဒီမှာကြည့် ..”
လက်တစ်ဖက်နှင့် ကိုင်ထားသော ဖုန်းကို မြှောက်လိုက်သည်တွင် သူရော၊ ချောချောငယ်ပါ ဖုန်းစကရင်ကို လှမ်းကြည့်သည်။ အခုတော့ ချောချောငယ် မျက်နှာက ခုနတုန်းကနှင့် မတူ၊ ပြုံးစစနှင့် ဖြစ်နေရာ နဂိုချောသည့် မျက်နှာလေးက ဝင်းဝင်းလှလှလေး ဖြစ်နေသည်။ ကလစ်ဆိုသည့် အသံနှင့်အတူ သူတို့နှစ်ယောက် ဖက်ထားသည့် ပုံတစ်ပုံ ရိုက်ပြီးသွားသည်။ နောက်ထပ်တစ်ခါ ထပ်ရိုက်ဦးမယ်ဟု ဇွဲက အပြောတွင် ချောငယ်က ခေါင်းကလေးအသာငုံ့ပြီး လက်တစ်ဖက်က ဇွဲခါးကို လာဖက်သည်။ ပြီးသည်နှင့် လက်ညိုးနှင့်လက်ခလယ်ကို မြှောက်ပြရင်း ဟန်ပါပါပြုံးသည်။ ကလစ်ခနဲ မြည်အောင် ဇွဲ တစ်ပုံထပ်ရိုက်လိုက်သည်။
နှစ်ဦးသား ရွရွလေး နမ်းနေရာကနေ တော်တော်ကြာတော့ အရှိန်တက်လာပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းအဆင့်သို့ အလိုလို ကူးပြောင်းသွားသည်။ ချောချောငယ်၏ လျှာလေးကို ဇွဲက သူ့လျှာနှင့် ဆွပေးသလို၊ သူ့လျှာကို အရုတ်တွင် ချောချောငယ်က သူမလျှာလေးနှင့် တဖန်လိုက်ဆွဲသည်။ အပေါ်ဘက်ပိုင်းတွင် ထိုသို့ French Kiss နှင့် နှစ်ပါးသွား နစ်မျောနေသလို၊ အောက်ဘက်တွင်လည်း ဇွဲလက်တွေက အပြတ်လှုပ်ရှားနေသည်။ လက်တစ်ဖက်က ချောချောငယ်အား သိုင်းဖက်ထားပြီး၊ ကျန်တစ်ဖက်ကမူ ရင်သားလုံးလုံးတစ်ဖက်ကို ဂါဝန်ပေါ်ကနေ အုပ်ကာ ဆော့ကစားသည်။ ချောချောငယ်ခမျာတော့ သူ့လည်ပင်းကို လက်ယှက်ကာ ဖက်ထားရင်း ကြောင်ပေါက်စလေးလို တအင်အင် ညည်းနေရှာသည်။
ပန်းဆီရောင်တောက်နေသော ဘရာလေးကို လက်နောက်ပြန်ခေါက်၍ ဖြုတ်လိုက်သည် ရှိသေး .. စိတ်ဇောတွေ တက်နေပုံ ရသည့် ဇွဲက သူမကိုယ်ပေါ် ပြိုဆင်းလာသဖြင့် ချောချောငယ် ယောင်ယမ်း၍ ညည်းမိသည်။ ထူထဲသော ဇွဲနှုတ်ခမ်းတွေက ဘရာမလွတ်သေးသည့် ရင်သားဖွေးဖွေးတစ်ဖက်ကို ရွှတ်ခနဲ နမ်းလိုက်တော့ သူမကိုယ်လေး ကော့သွားရှာသည်။ ဇွဲ နှုတ်က လှလိုက်တာ ချောရယ်ဆိုပြီး ရေရွတ်လိုက်ပြီး ရင်သားတွေအား ဖုံးထားသော ဘရာလေးကို ဆွဲချွတ်သည်။ လှပ်ခနဲအေးသွားသော ခံစားမှုနောက်တွင် နွေးထွေးသော နှုတ်ခမ်းနှင့် ဖိစုပ်ခြင်းကို သူမနို့သီးခေါင်းလေးတစ်ဖက် ခံလိုက်ရသည်။
မသေးလွန်း မကြီးလွန်းသော နို့သီးလေးနှစ်ဖက်ကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် စုပ်ရင်း ဇွဲ သူ့အဖြစ်အပျက်ကိုတောင် အံ့အားသင့်နေမိသည်။ မနက်ခင်းတုန်းက မမျှော်လင့်ဘဲ နွဲ့ဒါလီ၏ ပါးစပ်ကို အချောင် လိုးလိုက်ရသည်။ အခုကျတော့တစ်ခါ ချောချောငယ်ကို ဖြုတ်ရဦးမည်။ ဤအတိုင်းသာဆို ဒီဇင်ဘာလ အကုန်မှာ ရမည်ဆိုသော ဘောနပ်စ်တောင် ဒီနေ့ အဖြစ်အပျက်နှင့်တင် ညီမျှသွားမှာ သေချာပါသည်။ စိတ်ထဲ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ဖြစ်သွားသည့်အလျောက်၊ ချောချောငယ်သည် ဦးမိုးလုံးဟိန်း စပွန်ဆာ (ဘော့စ်၏ ဘာညာသာရကာ) ဆိုတာကို မေ့သွားပြီး ဇွဲနှုတ်ခမ်းက အောက်ဘက်သို့ ဆင်းသွားရှာသည်။
နှစ်ယောက်အိပ် အိပ်ရာကြီး၏ တစ်ဖက်စွန်းတွင် ပန်းဆီရောင် ဘရာလေးနှင့်အတူ ပင်တီသေးသေးလေးက တွန့်လိမ်ကာ လဲလျောင်းနေသည်။ မိနစ်ပိုင်းမျှ အချိန်ကာလတစ်ခု ကြာပြီးသွားသောအခါ ထိုအရာများကို ထပ်၍ ဇွဲ၏ အောက်ခံဘောင်းဘီက နေရာယူသွားသည်။ အောက်ခံဘောင်းဘီ၏ ဘေးတွင် ထပ်မံ၍ ရောက်ရှိသွားသည်က ထောင့်စွန်းလေး ပြဲနေသော ကွန်ဒွန်းအိတ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်း ဇွဲ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင် လိုလိုမယ်မယ်ထည့်ဆောင်ထားသော ကွန်ဒွန်းနှစ်ခုထဲမှ တစ်ခု ..
ဦးမိုးလုံးဟိန်းဟာက ဘယ်လောက်ကြီးသည် မသိသော်လည်း၊ ကိုယ့်ဟာကြီးကို ကြီးသည်ဟု အပြောခံရလိုက်မှုကြောင့် ယောက်ျားလေးတို့ သဘာဝ သွေးနထင်တောင် ရောက်သွားသည်။ လျှာနှင့် ကောင်းကောင်းကျွေးထားခဲ့သဖြင့် အရည်ကြည်ပေါင်းစုံနှင့် ပြောင်လက်နေသောအကွဲကြောင်းလေးပေါ်သို့ ထိပ်ဖူးကို အရင်တင်သည်။ အစွပ်စွပ်ထားသဖြင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သည့် အရသာတော့ မရပေမယ့်၊ ကျေနပ်မှုကတော့ အပြည့်ဖြစ်နေရာ ထိုအတွေ့နှင့်ပင် ဇွဲတစ်ယောက် ရှိန်းခနဲ ဖြစ်သွားရသည်။ နှစ်ချက်သုံးချက်လောက် အကွဲကြောင်းတလျှောက် ပွတ်ပွတ်ဆွဲပေးပြီး၊ ခနအကြာတွင် အောက်ဘက်တွင် ရှိနေသော ကျပ်ပြားဝိုင်းပေါက်လေးထဲ ဖိသွင်းလိုက်သည်။
အူးခနဲ အားခနဲ ညည်းသံက နှစ်ယောက်စလုံး နှုတ်ဖျားမှ တပြိုင်တည်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကားပေးထားသည့် ချောချောငယ် ခြေတန်တွေ ပို၍ ကားထွက်သွားပြီး၊ ဇွဲ၏ ဖင်ကြီးကမူ ရှေ့သို့တိုးကာ နေရာထပ်ယူလိုက်သည်။ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်နှင့် ဝင်နေသော လီးက အဖုတ်အတွင်းသားနံရံတွေကို ပွတ်တိုက်ပြီး ထပ်ဝင်ပြန်သည်။ အရမ်းကြီး တင်းကျပ်နေတာမျိုး မဖြစ်ပေမယ့်၊ စီးစီးပိုးပိုး ထိထိမိမိတော့ ရှိလိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း။ နှစ်ယောက်စလုံး မျက်ဝန်းတွေ တိုင်ပင်ထားသလို မှိတ်ကျသွားသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ ..
“ပစ်မထားပါဘူးကွာ .. စိတ်ချ .. နင်ကလဲ .. ငါတို့နှစ်ယောက်ကိစ္စကို နင့်လူကြီး မသိစေနဲ့ ..”
“ပြောစရာလား .. ကောင်စုတ်ရဲ့.. ငါ နေရာပျောက်သွားမှာပေါ့ .. ဟွန်း”
မူနွဲ့နွဲ့နှင့် အိပ်ရာပေါ်တွင် တတောင်ဆစ်လေးထောက်က ထထိုင်ရင်း ချောချောငယ်က အကျ င်္ီပြန်ဝတ်နေသော သူ့ကို မျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးသည်။ ဇွဲက အင်္ကျီဝတ်ပြီးသွားလို့ ဘောင်းဘီဝတ်ရန် မို့ရာပေါ်က ဆင်းလိုက်ပြီး ရယ်ကျဲကျဲ မျက်နှာနှင့် ချောချောငယ်ကို လှမ်းစသည်။ (အေး .. ကောင်စုတ်လုပ်နေ .. စကားနောက် တရားပါ .. နောက်တစ်ခါဆိုရင် အဲဒီကောင်ကို စုပ်နေရမယ်) ဟု ဆိုလိုက်တော့၊ ချောချောငယ်က သူမနားရှိ ခေါင်းအုံးတစ်ခုနှင့် ကောက်ပေါက်သည်။ ဇွဲကိုတော့ မထိဘဲ ဘေးနားကို ကျသည်။ တဟားဟားနှင့် ဇွဲ အော်ရယ်ပြီး အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လာခဲ့တော့ … မို့ရာပေါ်မှာ ကျန်နေခဲ့သေးသူ ချောချောငယ်ထံမှာ ထောပနာပြုသည့်အသံက လိုက်လာသည်။
ပုံမှန်ဆို ဇွဲတို့အလုပ်က စနေနေ့ လာစရာမလို။ ရုံးပိတ်သည်။ အရမ်းအလုပ်များသည့် အချိန်မျိုးတွင်သာ အိုဗာတိုင် သဘောမျိုး လာလာဆင်းပေးရသည်။ အင်း .. ထူးတော့ မထူးပါဘူး။ ငါလည်း တကယ်လုပ်စရာ အလုပ်တွေ ရှိနေတာပဲ။ လာလိုက်ပါ့မယ်ဟု ဇွဲ တွေးလိုက်ပြီး (Yes, Boss) လို့ ပြန်ရိုက်လိုက်သည်။ မဆိုင်းမတွဘဲ မက်ဆိတ်ပြန်ဝင်လာသည်က (I play golf with Sein Group) .. ဟင် .. သူ့ ဂေါ့ဖ်ရိုက်တာ ငါနဲ့လဲ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီး အတွေးဝင်သည်မှ မဆုံးသေး .. နောက်ထပ် မက်ဆိတ်တစ်စောင် ထပ်တွေ့ပြန်သည်။ (If my wife came, explain her) ဆိုပဲ။ တောက် !! .. လက်စသတ်တော့ ဒီကိစ္စအတွက် သူ့ကို ရုံးလာခိုင်းတာ ဖြစ်ရမည်။ ကဲပါ .. ထားလိုက်ပါတော့။ မဟုတ်လည်း .. အလုပ်ကိစ္စအတွက် လာရမှာပဲဟု တွေးပြီး ရုံးထဲမှ ထွက်လာခဲ့သည်။
ကောင်းမြတ် ရှိနေမည် ထင်ပေမယ့် တိုက်ခန်းပြန်ရောက်ချိန်တွင် သူ့ကို မတွေ့။ စားစရာထုပ်တွေကို အိမ်ရှေ့ခန်းမှာပင် တင်ထားလိုက်ပြီး ဖုန်းခေါ်လိုက်သည်။ ဖုန်းနှစ်ခါခေါ်သည့်တိုင် ကောင်းမြတ်က မကိုင်သဖြင့် (လဒကောင်)ဟု ကျိန်ဆဲလိုက်ပြီး အခန်းထဲသာ ဝင်လာခဲ့သည်။ နည်းနည်းလေး အေးတေးတေး ဖြစ်နေသော ရာသီဥတုဆိုပေမယ့် တိုက်ခန်းဆိုသည့်အတွက် လှောင်လှသည်။ ရေချိုးလိုက်ဦးမှဟု တွေးပြီး တဘက်တစ်ထည်ဆွဲကာ ရေချိုးခန်းဘက် ဝင်လာခဲ့သည်။ စိမ်ပြေနပြေ ရေချိုးပြီး အပြင်ထွက်လာတော့ အိမ်ရှေ့ခန်းဘက်ကနေ စကားသံတွေ ကြားရသည်။
“ဟုတ်တယ် .. ပြီးတော့ ကြိုးလည်း ဖြေမသွားပေးဘူး .. ကိုကောင်း သူငယ်ချင်းက မကောင်းဘူး .. ဟွန်း”
“မဟုတ်ပါဘူး ဟ .. ကောင်းမြတ်က ဘာလုပ်ဖို့ ပြင်ထားမှန်း မသိလို့လေ .. ကိုယ်ထွက်သွားတော့ သူပြန်လာတာပဲ မဟုတ်လား”
ရန်တွေ့နေသည့် ကောင်းမြတ်တို့အတွဲကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး စကားရောဖောရောလိုက်ကာ သူတို့နှင့်အတူ ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ တူတစ်ချောင်းကို ဖောက်ယူ၍လည်း ခေါက်ဆွဲဖတ်တွေကို နှိုက်မြည်းသည်။ နွဲ့ဒါလီက သူ့ကို မျက်စောင်းတစ်ချက်သာ ဟွန်းဆို၍ ထိုးပြီး ဘာမှဆက်မပြော။ သူမအကြည့်တွေက ရေချိုးထားသဖြင့် စိုပြေဝင်းလက်နေသည့် သူ့ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းသို့ ရောက်နေသည်ကိုတော့ ဇွဲ သတိထားမိပါသည်။
နှစ်ယောက်ထဲ တစ်ကမ္ဘာလို့ သတ်မှတ်ပြီး ချစ်ပွဲနွှဲနေကြသည့် ကောင်းမြတ်တို့အတွဲကို ကြည့်ရင်း ဇွဲ စိတ်တွေထလာသည်။ နွဲ့ဒါလီ၏ ပါးစပ်ကို မနက်က လိုးခဲ့ရသည်ဆိုသောအချက်နှင့် ချောချောငယ်ကို ကောင်းကောင်းကြီး ဖြုတ်ခဲ့ရသည်ဆိုသော အဖြစ်အပျက်တို့ကြောင့် ဇွဲ၏ ဆက်စ်ဒရိုက် (ကာမမောင်းနှင်မှုအား) က တက်ကြွနေသည်။ ခါတိုင်း ဒါမျိုးအဖြစ်အပျက်နှင့် ကြုံလျှင် ကောင်းမြတ်အား ကျောပေး၍ အိပ်နေလိုက်သော်လည်း၊ အခုတော့ ထိုသို့ မလုပ်ဖြစ်။ မလုပ်ဖြစ်သည့် အပြင် ကိုယ်ကိုပါ သူတို့ရှိရာဘက်သို့ ထပ်မံ၍ စောင်းလိုက်ရာ ကောင်းမြတ်က သူနိုးနေသည်ဆိုတာကို အရင်ဆုံး သတိပြုမိသွားသည်။
“ဟွကောင် .. တရေးနိုးလာပြီလား .. ဟီး”
ကောင်းမြတ်က မှန်သာမှန်နေပေမယ့် ဇွဲပစ္စည်း၏ အနေအထားကို သိနေသည့်အလျောက် သတိတရနှင့် လှမ်းတားသည်။ ဇွဲလည်း ကောင်းမြတ်နှင့် ပြိုင်၍ ဈေးဆစ်မနေ။ လောလောဆယ်တွင် တင်းမာထောင်တက်နေသော သူ့လီး ပျော့သွားဖို့သာ အာရုံထဲရှိပါသည်။ ဘယ်အပေါက်ဖြစ်ဖြစ် လုပ်လို့ရဖို့က အဓိက။ သူ့ကို ညုတုတု မျက်နှာပေးနှင့် ကြည့်နေသော နွဲ့ဒါလီ၏ ရှေ့သွားရပ်လိုက်ပြီး ပုဆိုးစကို ဖြေချလိုက်သည်။
နှုတ်ခမ်းလေးကိုဟ၍ လီးဒစ်ကို ငုံလိုက်မည်အပြုမှာပင် နွဲ့ဒါလီကိုယ်ကလေးက မြောက်တက်သွားလို့ ချိန်သားလွဲသွားသည်။ အောက်ဘက်မှာ ရှိနေသူ ကောင်းမြတ်က သူ့အစွမ်းကို ပြချင်သည့်နှယ် ဒါလီခါးလေးကို လက်နှင့်ညှပ်ကိုင်ပြီး ပင့်ဆောင့်လိုက်ပုံရသည်။ ဇွဲ နှုတ်ခမ်းထောင့်လေး ကွေးသွားအောင် ပြုံးမိသည်။ ကောင်းမြတ်ရဲ့ဒီအထာတွေက ရိုးနေပြီ။ ကောင်းမြတ် အောက်ကနေ ဘာတွေလုပ်နေသည်ကို ဂရုစိုက်မနေတော့ဘဲ အပေါ်အောက် ယမ်းခါနေသော နွဲ့ဒါလီခေါင်းကို လှမ်းကိုင်ပြီး ပါးစပ်ပေါက်လေးထဲ လီးတန်အား ထိုးထည့်လိုက်သည်။ (အား … ဇိမ်ရှိလိုက်တာ …)
ကောင်းမြတ်အတွက် ကျေနပ်ဖို့ ဖြစ်သလို .. နွဲ့ဒါလီအတွက်လည်း ကျေနပ်စရာက အကြိမ်ပေါင်းကို မရေတွက်နိုင်တော့။ ဇွဲအတွက်ကမူ ကျေနပ်ချက်က နှစ်ကြိမ်ထက် မပိုလိုက်။ တော်ပြီလေ။ တစ်နေ့တာအတွင်း လေးကြိမ်ဆိုသော စံချိန်သည် နည်းမှ မနည်းတာ။ ဒီနေ့အဖို့တော့ ဒီလောက်ပဲ။ မနက်ဖြန်ဆိုတာက ရှိသေးသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းမြတ်နှင့် နွဲ့ဒါလီက ကြည်ဖြူတိုင်း အသားကုန်ဆွဲလို့တော့ မဖြစ်။ တော်ကြာနေ ကောင်းမြတ်က သူ့ကို ဖုသွားမှာ စိုးရသေးသည်။ လောလောဆယ်တွင် သူက ကောင်းမြတ်အခန်းမှာ ကပ်ခိုနေရသည် မဟုတ်လား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နွဲ့ဒါလီ၏ အဖုတ်ကို လုပ်လိုက်ရသည့်အတွက် ဇွဲ ကျေနပ်ပါသည်။ နွဲ့ဒါလီလည်း ကျေနပ်သည်ဆိုတာ ဆူညံပွက်လောရိုက်အောင် အော်ညည်းပြီး အပြီးကြမ်းနှင့် ပြီးသွားမှုကြောင့် သေချာလှပါသည်။ တော်လောက်ပြီ အိပ်တော့မည်ဆိုပြီး သူ့ဘက်ခြမ်းကို ပြန်ကူးဖို့ ပြင်တော့ နွဲ့ဒါလီက မသွားနဲ့ဦး ကိုဇွဲဆိုပြီး သူ့လက်ကို လှမ်းဆွဲနေသေးသည်။ ဇွဲက မနက်ဖြန် ရုံးတက်ရမှာမို့ အိပ်တော့မယ် .. ဂွတ်နိုက်လို့ စကားဖြတ်ပြီး ထွက်ပြေးလာခဲ့ရသည်။ တကယ်လည်း ကိုယ့်အိပ်ရာပြန်ရောက်တော့ စောင်ခေါင်းမြီးခြုံ၍ ထိုးအိပ်လိုက်သည်။ ကောင်းမြတ်နှင့် နွဲ့ဒါလီ ဘယ်လို ဆက်စခန်းသွားသည်ကို ဂရုမစိုက်နိုင်အားတော့ ….
ကိုယ့်အလုပ်နှင့်ကိုယ် အာရုံရောက်ပြီး မြန်မြန်ပြီးအောင် လုပ်နေသဖြင့် အချိန်မည်မျှ ကြာသွားမှန်း ဇွဲ သတိမထားမိပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း မေ့လျောသလို ဖြစ်နေရာ တဒေါက်ဒေါက်နှင့် အသံထွက်လာမှ အသံလာရာဘက်သို့ လှမ်းကြည့်မိသည်။ ထိုရောအခါ ဇွဲတစ်ယောက် အသက်ရှူဖို့ရန် မေ့လျော့သွားစေနိုင်သော မြင်ကွင်းတစ်ခုအား တွေ့လိုက်ရသည်။
တိတ်ဆိတ်နေသော ရုံးခန်းကျယ်ကြီးထဲတွင် တဒေါက်ဒေါက်နှင့် အသံမှန်မှန်ထွက်အောင် ဖန်တီးလိုက်သူကား တခြားမဟုတ်။ ဘော့စ်ဖြစ်သူ ဦးမိုးလုံးဟိန်း၏ မိန်းမ ဒေါ်နန်းယမုံ လမ်းလျှောက်လာရာမှ စီးထားသည့် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်၏ အသံသာ ဖြစ်သည်။ ဇွဲတစ်ယောက် အသက်ရှူရန် မေ့လျောသွားစေသည့် အကြောင်းကား ဒေါ်နန်းယမုံ၏ အပြင်အဆင်ကြောင့်ဟု ရှင်းပြရလိမ့်မည်။ ဒေါ်နန်းယမုံ လှသည်၊ ချောသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကား ယောက်ျား၊မိန်းမ အယောက်တစ်ရာတွင်၊ တစ်ရာလုံး ထောက်ခံကြမည်သာ။ သို့အတွက်ကြောင့် အထူးရှင်းပြနေရန် လိုလိမ့်မည် မထင်ပါ။
ဒေါ်နန်းယမုံသည် မြင်ရုံနှင့် ဈေးကြီးပေးဝယ်ရလိမ့်မည်ဟု သိသာသော ဘော်ငွေရောင် Halter Dress ကို ဝတ်ဆင်ထားသည်။ ဝတ်စုံ၏ အရှည်က ဒူးအထိတောင် မရောက်သဖြင့် အပြစ်အနာဆာကင်းကာ ဖြောင့်စင်းသွယ်တန်းနေသော ပေါင်တန်များကို မြင်နေရသည်။ အပေါ်ဘက်တွင်မူ လည်တိုင်ကျော့ကျော့အား သိုင်းပတ်ထားသော အစနှစ်စနေရာမှ လွဲ၍ ကျန်သည့်နေရာများက အကာအကွယ်မဲ့နေရာ ကျော့ရှင်းသော ပုခုံးသားဝင်းဝင်းလေးနှင့်အတူ၊ မို့မောက်ပြည့်ဖြိုးသော ရင်သားတွေ၏ အနေအထားကို အဝေးကပင် သိသာစွာ တွေ့နေရသည်။ ရုံးခန်းထဲတွင် မီးတွေ ဖွင့်ထားတာ ဖြစ်သည့်တိုင် ဒေါ်နန်းယမုံ လမ်းလျှောက်လာတိုင်း ထိုနေရာတစ်ဝိုက်တွင် လင်းခနဲ ဖြစ်သွားသလို ဇွဲ၏ မျက်လုံးထဲတွင် ခံစားမြင်ယောင်နေသည်။
အနားရောက်လာသည့် ဒေါ်နန်းယမုံက ရုံးအတွင်း မျက်စိဝေ့ကာ ကစားလိုက်ပြီး သူ့ကို ချိုသာစွာပင် မေးလိုက်သည်။ ဒေါ်နန်းယမုံ၏ ပုံစံ အေးအေးဆေးဆေးနှင့် ရှိနေသော်လည်း ဇွဲကမူ ဘော့စ်ပြောခဲ့သည့် အကြောင်းအရာတွေ ခေါင်းထဲရောက်လာသည်မို့ စိတ်ထဲမသက်မသာ ဖြစ်မိသည်။ မလုံမလဲနှင့် ထိုင်နေရာမှ ထ၍တောင် နှုတ်ဆက်မိသည်။
“မ .. မရှိဘူး .. ဆရာမ .. ဘော့စ် ဂေါ့ဖ်သွားရိုက်မယ်လို့ ပြောသွားတယ်”
ဇွဲတစ်ယောက် တံတွေးတစ်ချက်မျိုချပြီး ရှေ့ကလျှောက်သွားသည့် ဒေါ်နန်းယမုံနောက်မှ ကပ်ကာ လိုက်လာခဲ့သည်။ ဟန်ချက်ညီညီနှင့် လျှောက်သွားသော ဒေါ်နန်းယမုံ၏ လက်ထဲတွင် အဆောင်အယောင်များအဖြစ် Prada အိတ်အကောင်းစားနှင့် Mercedes တံဆိပ်ပါ ကားသော့ကို ကိုင်ဆွဲထားသည်။ သို့သော် ဇွဲ ထိုအရာတွေကို စိတ်မဝင်စားပါ။ သူ စိတ်ဝင်စားနေသည်က ခါးကျင်ကျင်လေးအောက်မှ စွင့်ကားလုံးထွက်နေသော တင်သားများကို။ ဘာပင်တီကြိုးအရာမှ မတွေ့ရသဖြင့် ဒေါ်နန်းယမုံ အောက်ခံများ ဝတ်ထားရဲ့လားလို့ စိတ်ထဲကနေ အဖြေရှာနေမိသည်။ ဒါမှမဟုတ် ဂျီစထရင်းများ ဝတ်ထားတာလား။ ဖြူဖွေးလုံးဝန်းနေမည့် ဖင်သားကြီးများကြားတွင် ကြိုးတစ်ချောင်း ဂျီစထရင်းနှင့်ဆိုသော် ..
ညို့ငင်ကာ အခေါ်ခံရသည့်နှယ် လိုက်ပါလာသည့် ဇွဲ .. ဒေါ်နန်းယမုံထံမှ ခပ်တင်းတင်း ခေါ်သံကြောင့် အိပ်မက်က လန့်နိုးသူလို ပျာပျာသလဲ ထူးမိသည်။ ဒေါ်နန်းယမုံက ဘော့စ်၏ ရုံးခန်းထဲက အလုပ်စားပွဲကြီးဆီသို့ ဦးတည်ကာ လျှောက်သွားနေသည်။
ဘာခိုင်းလိုက်သည်ကို သိလိုက်သည်မို့ ဇွဲတစ်ယောက် ဖြတ်ကျော်လာခဲ့သည့် ရုံးခန်းတံခါးကို အလျင်အမြန် သွားပိတ်သည်။ အပြင်ဘက်သို့ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော မှန်ချပ်ကြီးအား ကာရံထားသော လိုက်ကာလိပ်က မနေ့ကတင် ချထားသဖြင့် အလုံပိတ်ရုံးခန်းထဲမှာ သူတို့ နှစ်ယောက်ထဲသာ ရှိနေသည်ကို မည်သူမှ သိနိုင်မှာမဟုတ်။ ဇွဲတစ်ယောက် လည်ချောင်းထဲ တက်လာသည့် တံတွေးကို မသိမသာ မျိုချပြီး အခန်းဘက် မျက်နှာပြန်မူလိုက်သည်တွင် ဒေါ်နန်းယမုံက စားပွဲနောက်ရှိ ဆုံလည်ခုံတွင် မထိုင်ဘဲ ရှေ့ဘက်စားပွဲစွန်းတွင် တင်ပခွေလွှဲ ဝင်ထိုင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ သူမလက်ထဲတွင်တော့ A4 အရွယ် ရှိမည့် စက္ကူအိတ်အညိုတစ်လုံးကို ထုတ်၍ ကိုင်ထားသည်။
ဒေါ်နန်းယမုံက သူမလက်ထဲ ကိုင်ထားသော စက္ကူအိတ်ရှည်ထဲမှ ဓါတ်ပုံတစ်ခုကို ထုတ်ပြီး ငုံ့ကာ လှမ်းပေးသည်။ လက်ဖြန့်ကာ လှမ်းယူလိုက်သော ဇွဲ မျက်လုံးတွေက ဓါတ်ပုံပေါ်မှာ ရှိမနေပါ။ ကိုယ်ကိုကိုင်းလိုက်မှုကြောင့် ရင်ဘတ်နေရာမှ အကျ င်္ီစကွာသွားသဖြင့် မောက်ကြွနေသည့် ဒေါ်နန်းယမုံ၏ အရှေ့ပိုင်းကို ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်မိသွားသည်။ တစွန်းတစမြင်နေရသော ဆက်ဆီဘရာဖြူဖြူလေးထဲမှ ဖောင်းထွက်နေသည့် နို့လုံးတွေက ဖြူဖွေးဥနုနေသည်။
“အင်း … တို့မေးတာ အရင်ဖြေဦး … အဲဒီကောင်မလေးက မင်းရည်းစား ဆိုတာ ဟုတ်လား”
“ဟုတ် .. ဟုတ်တယ် .. ချောချောငယ်က ကျနော့် ရည်းစားပါ”
လိမ်ညာကာ ပြောရသည့် စကားမို့ ဒေါ်နန်းယမုံအား မျက်နှာချင်းမဆိုင်ဝံ့ပါ။ ခေါင်းငုံ့ကာ အဖြေပေးလိုက်သည်။ ဒေါ်နန်းယမုံထံမှ ခေတ္တခဏအသံတိတ်သွားသည်။ ဇွဲသည်ပင် တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို မခံရပ်နိုင်လို့ ငုံ့ထားသော ခေါင်းကို ပြန်မော့ကြည့်တော့ ဒေါ်နန်းယမုံက စက္ကူအိတ်ထဲမှ နောက်ထပ်ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို ထပ်ထုတ်နေတာ တွေ့သည်။
ဒီတစ်ခါတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ယူကြည့်လိုက်သည်။ ရိုးရိုးတန်းတန်းပုံ ဖြစ်မည်ထင်ပြီး ယူကြည့်လိုက်မှ ဓါတ်ပုံထဲက မြင်ကွင်းကြောင့် ဇွဲ တုန်လှုပ်သွားသည်။ ချောချောငယ်နှင့် ဦးမိုးလုံးဟိန်းတို့နှစ်ယောက်ပုံ ဖြစ်သော်လည်း၊ ဓါတ်ပုံထဲမှ လူနှစ်ယောက်သည် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ဖက်ကာ နမ်းစုပ်နေကြသည်။ နေရာကတော့ မနေ့ကပင် ရောက်ခဲ့သဖြင့် ဘယ်နေရာလဲဆိုတာ ဇွဲကောင်းကောင်း သိသည်။ နှစ်ယောက်အိပ် ကုတင်ကြီး ရှိရာ အိပ်ခန်းထဲတွင် ဖြစ်သည်။ ဓါတ်ပုံက အဝေးကနေ zoom ဆွဲပြီး လှမ်းရိုက်ထားတာ ဖြစ်သော်လည်း လိုက်ကာ မချထားသော အခန်းပြတင်းပေါက်ကြောင့် လူနှစ်ဦး၏ ပုံစံကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်နိုင်ပါသည်။
“ဒါ .. ဒါ !!!” (တကယ်လည်း အံ့အားသင့်သွားသည့် ဇွဲ .. ဒီတစ်ခါတော့ သူ၏ တုန်လှုပ်မှုကို ဟန်ဆောင်ပြီး ပြုလုပ်နေစရာ မလိုလိုက်)
“ဒီမှာ ကြည့်ဦး .. ဇွဲ”
သူ့အခြေအနေကို ကြည့်ရင်း အကဲခတ်နေသည့် ဒေါ်နန်းယမုံက နောက်ထပ်ဓါတ်ပုံ သုံးပုံ ထုတ်ပေးပြန်သည်။ ပထမပုံက ဘရာလေးသာ ကျန်တော့သည့် ချောချောငယ်၏ နို့တွေကို ဦးမိုးလုံးဟိန်းက ခေါင်းအပ်ကာ နမ်းနေပုံ၊ နောက်တစ်ပုံက ကုတင်စွန်းတွင် ထိုင်နေသော ဦးမိုးလုံးဟိန်းအား ချောငယ်က လီးစုပ်ပေးနေပုံနှင့် နောက်ဆုံးတစ်ပုံကမူ လေးဘက်ကုန်းပေးထားသော ချောငယ်အား ဦးမိုးလုံးဟိန်းက နောက်ကနေ ခွကာ လိုးနေပုံဖြစ်သည်။
ဓါတ်ပုံတွေ ကိုင်ထားသော ဇွဲ၏ လက်တွေ တုန်လှုပ်ပြီး မျက်နှာက ဖြူဖတ်ဖြူလျော် ဖြစ်သွားသည်။ ဘော့စ်က သူ့ကို ပြောတုန်းက ချောချောငယ်နှင့် ရိုးရိုးတန်း တွဲထားသော ပုံများသာ သူ့မိန်းမဆီမှ ရှိသည်ဆို။ အခုတော့ ဒီပုံတွေက ရိုးရိုးတန်းတန်း ဖြစ်နေမလား။ ဖိုတိုရှော့မဖြစ်နိုင်ဆိုတော ချောချောငယ်၏ တကိုယ်လုံးကို မြင်ဖူးခဲ့သည့်အပြင်၊ ဒီအိပ်ခန်းထဲပါ ရောက်ဖူးသည်မို့ ဇွဲကောင်းကောင်းသိနေသည်။ သူ့တွင် ဒေါ်နန်းယမုံကို ရှင်းပြစရာ ဘာစကားလုံးမှ ရှိမနေတော့ပါ။
“ကျ .. ကျနော် .. မ .. မယုံနိုင်ဘူး” (သူ့အလုပ်တော့ ပြုတ်ပြီဆိုပြီး တွေးမိသည့်အလျောက် ဇွဲအသံတွေက အလိုလို တုန်နေသည်)
“တိရစ္ဆာန်တွေ .. ခွေးတွေ .. သစ္စာမရှိတဲ့ဟာတွေ !!”
တင်းမာပြတ်သားလှသည့် လေသံကြောင့် ဇွဲ လန့်တောင်လန့်သွားရသည်။ ဒေါ်နန်းယမုံနှင့် ပတ်သက်ခဲ့သည့် ကာလတလျှောက်လုံး သူမ ဒီလောက် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတာကို မမြင်ဘူးခဲ့။ ဖြူဖွေးချောမွေ့နေသော မျက်နှာလေးသည် ဒေါသရောင်ကြောင့် နီမြန်းနေရှာသည်။ သို့သော် လှတာကလည်း လှနေလေသည်။ အလိုလို ထိုမျက်နှာအား ဇွဲ ဆွေးမြေ့မြေ့ မျက်လုံးတွေနှင့် ငေးကြည့်မိသွားသည်။
“ချော ..ချောငယ် .. ဒီလိုလုပ်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ထင်မထားဘူး”
သူ့အသံငယ်ငယ်ကြောင့် ဒေါသထွက်နေသည့် ဒေါ်နန်းယမုံ သူ့အား နားလည်ဟန်နှင့် ငုံ့ကြည့်သည်။ သူမကိုယ်အား သူထိုင်နေရာနှင့် နီးအောင် ရွှေ့လိုက်ပြီး ဇွဲ ပုခုံးအား ညင်သာစွာ သပ်ပေးသည်။ သူမ ကြည့်ရတာ သူ့အတွက် ဝမ်းနည်းနေသည့် အသွင်ပေါက်နေသည်။
“မမယောက်ျားအတွက် .. မမ တောင်းပန်ပါတယ် .. သူဟာ တကယ်ကို အကျင့်မကောင်းတဲ့သူ”
ထင်မှတ်မထားသည့် အချိုးအကွေ့ကြောင့် ဇွဲ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ။ အမြဲတမ်း ဆရာမလို့ ခေါ်သည်ကို မငြင်းဘဲ လက်ခံခဲ့သော ဒေါ်နန်းယမုံက အခုတော့ မမဆိုပြီး သူမကိုယ်သူမ ပြောလာသည်။ ဇွဲတစ်ယောက် ဝမ်းပဲသာရမလား၊ ပြေးပေါက်ပဲ ရှာရမလား မသိ။ အခုလောလောဆယ်တွင်တော့ လုပ်ကြံပြောထားသည့်အကွက်အတိုင်း လိုက်မှ ဖြစ်မည်ဟုတွေးပြီး မျက်နှာကို ညိုးငယ်စွာထားရင်း တုံ့ပြန်လိုက်သည်။
“မပြောပါနဲ့တော့ မမရယ် .. လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်တာပါ”
“အင်း … ဇွဲ .. မင်းသိလား .. မမ အရမ်းကို စိတ်ဆိုးနေတာ .. တတ်နိုင်ရင် ဒင်းကို နုတ်နုတ်ကို စင်းပစ်ချင်တာ”
မြတ်စွာဖျား .. ဇွဲ ရင်ထဲမှာ တုန်လှုပ်သွားသည်။ ဒေါ်နန်းယမုံ၏ အဆင့်အတန်းနှင့် လူတစ်ယောက်ကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ချင်သည်ဆိုလျှင် လွယ်မှလွယ်။ ရုတ်တရက် ခေါင်းကြိမ်းလာသလို ခံစားရသည်။ လောလောဆယ်တွင် သူ့ကို သံသယမဖြစ်အောင် နေရမည်။
“ဟုတ်တယ် .. ကျနော်လဲ .. မကျေနပ်ဘူး .. ချော .. လုပ်ရက်တယ်”
“ဒင်း .. မမ နောက်ကွယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ ထင်ထားတာတော့ တော်တော်ကြာပြီ .. ဘယ်သူနဲ့လဲ ဆိုတာတာ သေချာမသိတာ .. သိမယ့်သိတော့ .. မင်း .. မင်းရဲ့ရည်းစားနဲ့ …” (ပြောပြီး အားနာသွားဟန်နှင့် ဒေါ်နန်းယမုံ အသံက တိတ်သွားသည်)
“ဒါ .. သစ္စာဖောက်တာပဲ !!”
“ဟုတ်တယ် .. သစ္စာဖောက်တာ .. မမ လုံးဝမကျေနပ်ဘူး !! … ဒင်းကို မှတ်လောက်သားလောက် ဖြစ်အောင် ဆုံးမရမယ်”
မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ဇွဲ တွေးမိသည်။ နှုတ်ခမ်းကို တင်းတင်းစေ့ထားသော ဒေါ်နန်းယမုံ၏ မျက်နှာက ပြတ်သားမှုအပြည့်နှင့် တင်းမာနေသည်။ ဦးမိုးလုံးဟိန်းအား သူမ ဘာပြန်လုပ်မည်ဆိုတာကို ဇွဲ မစဉ်းစားတတ်။ အထူးသဖြင့် ဘာဖြစ်လို့ သူ့ကို ဒီအကြောင်းတွေ အသေးစိတ်လာပြောနေသည်ဆိုတာကို မှန်းဆလို့ မရ။ စိတ်ထဲမှာတော့ သူ့ကို အသုံးချပြီး ဦးမိုးလုံးဟိန်းအား အဆိပ်ခတ်ခိုင်းတာတို့၊ ချောင်းရိုက်ခိုင်းတာတို့တော့ မဟုတ်လောက်ဟု တွေးနေမိသည်။
“ဒင်းတို့အတွက် မမတို့ လက်စားချေရမယ်”
ဒေါ်နန်းယမုံ အပြောကြောင့် ကျောရိုးထဲက စိမ့်လာသလို ခံစားရသည်။ ထို့နောက်မှ မမတို့ဆိုသော အသုံးကို သတိထားမိသည်။ မမတို့ဆိုတော့ .. ဒေါ်နန်းယမုံဆိုလိုသည်မှာ သူမနှင့် သူ … ။ သူမဘာဆိုလိုချင်တာလဲဟု လှမ်းမေးမည်အပြုမှာပင် ဒေါ်နန်းယမုံက သူ့ထက်ဦးအောင် လှမ်းပြောလိုက်သည်။
“ဒင်းတို့ တိုက်တဲ့ ဆေးခါးကြီး .. ဒင်းတို့ကို ပြန်တိုက်ရမယ်”
“မမ .. ဘာကို ပြောချင်တာလဲ ??”
“မမတို့လည်း သူတို့လိုမျိုး ဓါတ်ပုံတွေ ဖန်တီးကြတာပေါ့”
ဒီစကားကြားတော့ ဇွဲတစ်ယောက် မျက်လုံးပြူးသွားသည်။ ဒေါ်နန်းယမုံ ဘာဆိုလိုသည်ကို လတ်တလော အဖြစ်အပျက်တွေမှာ ကိုယ်တိုင် ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ထားသဖြင့် ဇွဲ နားလည်လိုက်သည်။ သို့သော် သူအနေနှင့် အရမ်း စိတ်ကူးယဉ်ပြီး တွေးနေတာများလားဟု စဉ်းစားမိပြန်သည်။ မယုံကြည်နိုင်သော လေသံနှင့် လက်ထဲတွင် ကိုင်ထားသော ဓါတ်ပုံကို မြှောက်ပြလိုက်သည်။
“မမဆိုလိုချင်တာက … မမ နဲ့ ကျနော် .. ဒီလို ??”
သေချာအောင် မေးလိုက်ပြီးမှ သူ့လက်ထဲတွင် ကိုင်ထားသော ပုံက ချောချောငယ် ဦးမိုးလုံးဟိန်းအား ပလွေမှုတ်ပေးနေသည့် ပုံမှန်း သတိထားမိသည်။ လည်ချောင်းထဲရှိ နောက်ထပ်စကားလုံးတွေ ခုန်ထွက်မလာခင် အမြန်ဘရိတ်အုပ်လိုက်ရသည်။ ဇွဲတစ်ယောက် အမူအရာ ပျက်နေသလောက် ဒေါ်နန်းယမုံကမူ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားဟန်နှင့် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရှိလှသည်။
“ဟုတ်တယ် .. သူတို့လိုပဲ .. နေဦး .. မင်းဘော့စ်ဆီမှာ ကင်မရာ ရှိလား”
“ရှိ .. တယ် .. မမ .. အံဆွဲထဲမှာ အမြဲထည့်ထားလေ့ရှိတယ်”
ဒေါ်နန်းယမုံက အိုကေလေဟု ပြောပြီး ထိုင်နေရာမှ ဆင်းကာ စားပွဲ၏ တခြားဘက်သို့ လျှောက်သွားသည်။ ဇွဲ ညွှန်သည့်အတိုင်း အံဆွဲကို ဖွင့်လိုက်ပြီး အထဲတွင် တွေ့လိုက်သော ကင်မရာကို ထောင်ကာပြသည်။ ဒေါ်နန်းယမုံ၏ လှုပ်ရှားမှုက သွက်လက်နေသလောက်၊ ဇွဲကမူ ကြုံတွေ့နေရသည့် အဖြစ်အပျက်ကို မယုံနိုင်သည့်အလား ကျောက်ရုပ်တရုပ်လို မလှုပ်ဘဲ ငြိမ်သက်နေသည်။
“မမ .. ဓါတ်ပုံရိုက်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ .. ဒါပေမယ့် .. ကျနော့် အလုပ်က ..”
“နိုး .. နိုး .. စိတ်မပူနဲ့ .. ဇွဲ .. မမတာဝန်ယူတယ် .. မင်းရဲ့ ဘော့စ် မင်းကို လက်ညိုးနဲ့တောင် မထိစေရဘူး”
ရဲရဲကြီး အာမခံနေသော ဒေါ်နန်းယမုံကြောင့် ဇွဲ ပုခုံးတစ်ချက်သာ တွန့်ပြလိုက်သည်။ ဟုတ်သည်လေ။ သူမက ဒီလိုပြောမှတော့ ဘာဂရုစိုက်စရာ လိုနေသေးသနည်း။ နောက်ပြီး အခုအခြေအနေတွင် အလုပ်ပြုတ်မည့်ကိစ္စထက် မမဟု သူမကိုယ်သူမ သုံးနှုန်းနေသော ဒေါ်နန်းယမုံ .. လက်စားချေရန်ဆိုသော ခေါင်းစဉ်နှင့် ဘယ်လောက်အထိ လုပ်ဆောင်ချင်သည့်အချက်ကို ပိုစိတ်ဝင်စားနေမိသည်။
“ဟုတ်ကဲ့ .. ဒါဆို … ကျနော်တို့ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ..”
“အင်း .. ဟုတ်သားပဲ … ဒီလိုလုပ်မယ် .. တို့နှစ်ယောက် ဖက်ထားတာနဲ့ စကြတာပေါ့”
“အိုကေ .. မမ”
ဒေါ်နန်းယမုံ ပေးလိုက်သော ကင်မရာကို ထိုင်ရာမှ ထ၍ လှမ်းယူလိုက်သည်။ ဇွဲနှင့် နန်းယမုံ .. ဦးမိုးလုံးဟိန်း၏ ခန့်ညားလှသော ရုံးခန်းအတွင်းမှ သစ်လွင်လှသော စားပွဲကြီး၏ အစွန်းတွင် အတူတူရပ်မိသွားသည်။ နန်းယမုံတော့ ဘယ်လိုနေသည် မသိ .. ဇွဲကတော့ ရင်ဘတ်ထဲတွင် ကုလားဘုရားပွဲ လှည့်နေသလိုကို ခံစားနေရသည်။ အဲယားကွန်းအသံ တိုးတိုးလေးသာ မြည်နေသော အလုံပိတ်ရုံးခန်းထဲတွင် သူ့ရင်ခုန်သံ တဒုန်းဒုန်းက အတော်ပင် ကျယ်လောင်လှသည်။ နန်းယမုံ ကြားသွားမှာတောင် စိတ်ပူရသည်။
“ဒီလောက်ဆို ရမလား .. မမ”
ကင်မရာကိုင်ထားသော ညာလက်ကို ဆန့်ထုတ်ပြီး ဆယ်ဖီရိုက်လို့ရအောင် ဇွဲ ပြင်လိုက်သည်။ ရင်သားထွားထွားတွေ မို့တက်လာသည်အထိ နန်းယမုံက အသက်ကိုရှူလိုက်ရင်း ဇွဲအနားသို့ တိုးကပ်လာသည်။ သင်းပျံ့ သော အကောင်းစား ရေမွှေးနံ့က စောစောကထက် ပို၍ နီးကပ်စွာ ဇွဲထံပါးသို့ ရောက်ရှိလာသည်။
“ရပြီ .. ရိုက်တော့”
ကိုယ်ချင်းထိကပ်သွားမှုနှင့်အတူ သူ့ခါးကို လာဖက်လိုက်သည့် နန်းယမုံကြောင့် လက်မြှောက်ကိုင်ထားသော ကင်မရာဘက်ကို ဇွဲ ကြည့်နေဖို့ သတိမေ့သွားသည်။ နီးကပ်လာသည့် မျက်နှာဖူးဖူးလှလှလေးအား ယောင်ယမ်း၍ ငေးမိသွားပြီးနောက် ကင်မရာခလုတ်ကို ကိုင်ထားသော လက်ညိုးက အလိုအလျောက် နှိပ်မိသွားသည်။
“ရိုက်ပြီးပြီလား .. ပြဦး”
သူ့လက်ထဲမှ ကင်မရာကို ဆွဲယူသွားတော့ ဇွဲ ယောင်တောင်တောင်နှင့် ပေးလိုက်၏။ နန်းယမုံ display screen ကို အာရုံစိုက်နေချိန်တွင် ဘေးစောင်းအနေအထားနှင့် မြင်နေရသော သူမအား ခိုးကြည့်မိသည်။ ဇွဲက နန်းယမုံထက် စာလျှင် ခေါင်းတစ်လုံးစာလောက် အသာလေး မြင့်နေလေရာ၊ ဖျဲသီး (ဖရဲသီး) လို့ တင်စားခေါ်ဆိုလို့ရမည့် ရွှေရင်ထွားထွားတွေ၏ အထက်ပိုင်းကို အသက်ရှူမှားဖွယ် မြင်နေရသည်။
“အဆင်မပြေသေးဘူး .. ဇွဲ .. ဒီလောက်နဲ့တော့ မမတို့နှစ်ယောက်က အတွဲနဲ့ တူမနေဘူး ..”
“ဒါ .. ဒါဆို .. ဟိုလေ .. ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် နမ်းနေတဲ့ ပုံဆိုရင်ကော”
ချောချောငယ်နှင့်တုန်းက အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်စဉ်းစားမိသည့် ဇွဲ .. အရဲစွန့်ကာ ပြောလိုက်သည်။ နန်းယမုံက ကြည်လင်လှသည့် မျက်ဝန်းနက်နက်လေးများနှင့် သူ့ကို အခုမှ မြင်ဖူးသည့် လူတစ်ယောက်လို စိုက်ကြည့်သည်။ ဇွဲ ရင်ထဲ ရှိရှိသမျှ တန်ခိုးရှင်တွေကို တမိပြန်သည်။ စက္ကန့်ပိုင်းလောက် အချိန်ကြာသွားတော့မှ ဇွဲ အဆိုကို လက်ခံသည့်နှယ် နန်းယမုံ ခေါင်းလေးညိတ်ပြသည်။ သူမလက်ထဲ ကိုင်ထားသော ကင်မရာကို ဇွဲအား ပြန်ပေးလိုက်သည်။
နှစ်ဦးသား ကိုယ်ချင်း ပြန်ပူးကပ်သွားသည်။ ဒီတစ်ခါတော့ ပထမတစ်ခါလို ဘေးတိုက်အနေအထားနှင့် မဟုတ်ဘဲ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားနှင့် ဖြစ်သည်။ ဇွဲတစ်ယောက် စိတ်လှုပ်ရှားနေသလို၊ သူ့ကံကြမ္မာကိုလည်း အံ့သြမိသည်။ ဤဘဝတစ်သက်တာတွင် ဘော့စ်ရဲ့သရဖူမယားဖြစ်သူ ဒေါ်နန်းယမုံအား နမ်းရလိမ့်မည်ဟု ဘယ်တုန်းကမှ ထင်မထားခဲ့ပါ။
ဇွဲ၏ ခေါင်းက ရှေ့တိုးရင်း ငုံ့ကျသွားသလို၊ နန်းယမုံ၏ မျက်နှာလေးက မော်ပေးရင်း ရှေ့သို့ တိုးလာသည်။ ခြေတစ်လှမ်းချင်း တိုးလှမ်းလိုက်ကြသည့် သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး .. မျက်နှာချင်း မထိခင် နန်းယမုံ၏ မောက်ထွက်နေသော ရင်ဆိုင်တွေနှင့် ဇွဲရင်ဘတ် အရင်ဦးဆုံး ပွတ်တိုက်မိသည်။ ထို့နောက်မှ နှစ်ဦးသား နှုတ်ခမ်းများ ဖြေညင်းစွာ ထိတွေ့သွားသည်။
စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလို့ လည်ချောင်းထဲက လျှံထွက်လာသော ညည်းသံကို အပြင်မရောက်အောင် ဇွဲ တော်တော်ထိန်းလိုက်ရသည်။ ကင်မရာကိုင်ထားသော တုန်ယင်နေသည့် လက်အား ငြိမ်အောင် ကြိုးစားပြီး ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို မြန်မြန်ရိုက်လိုက်သည်။ ကလစ်ဆိုသော အသံကြားတော့ နန်းယမုံက နောက်သို့ အမြန်ပြန်ဆုတ်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက် လူချင်း ပြန်ကွာသွားသည်။
“ပြပါဦး .. မမကို”
ကင်မရာကို ယူလိုက်သည် မဟုတ်ဘဲ ဇွဲဘေးနားကနေသာ လှမ်းကြည့်သဖြင့် သူတို့နှစ်ယောက် လူချင်းပြန်ပူးသည်။ ဇွဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိပေးရင်း Display Screen ကိုသာ နန်းယမုံကြည့်သလို လိုက်ကြည့်သည်။ တကယ်ကို သူနှင့် နန်းယမုံ နှုတ်ခမ်းတွေက ထိတွေ့ပူးကပ်နေသည်။ သို့သော် တစ်ခုခု လိုအပ်နေမှန်း ကြည့်လိုက်တာနှင့် သိသာနေပြန်သည်။
“ဆိုးတော့ မဆိုးဘူး .. ဒါပေမယ့် ဒီလောက်နဲ့ ဒင်းတို့ ဂျဲလက်စ် မဖြစ်လောက်ဘူးနဲ့ တူတယ် .. မမတို့ ပိုပြီး ပက်စ်ရှင် (passion) လိုမလား မသိဘူး”
“ဒါဆို .. ထပ်စမ်းကြည့်ရအောင်”
ဒီတစ်ခါတော့ ဇွဲတစ်ယောက် နောက်တွန့်မနေတော့ပါ။ စောစောတုန်းကတော့ ဒေါ်နန်းယမုံကို သူဌေးကတော်ဆိုသော အရှိန်အဝါနှင့် ရှိန်နေခဲ့သည်။ အခုတော့ ဇွဲ စိတ်ထဲတွင် ဒီအတွေးတွေ မရှိတော့ပါ။ သူ့ကံ ဘယ်လောက် ထပ်ကောင်းနိုင်ဦးမလဲဆိုတာကို လက်တွေ့ စမ်းချင်လာသည်။ နန်းယမုံ အနားတိုးလာသည်တွင် သူကပင် လက်ဦးအောင် သူမခါးလေးအား လှမ်းဆွဲပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို သာသာလေး ဖိနမ်းပစ်လိုက်သည်။
ချိုမြသင်းရီသော အနမ်း၏ အရသာက နန်းယမုံ၏ နှုတ်ခမ်းများမှ တဆင့် ဇွဲ ကိုယ်ထဲသို့ စီးဆင်းသွားသည်။ ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေသော နန်းယမုံ၏ ကိုယ်လေးက တောင့်တောင့်လေး ဖြစ်နေသည်ဆိုတာကို ဇွဲ သတိထားမိသည်။ နှုတ်ခမ်းထောင့်တွန့်ကာ မခိုးမခန့်ပြုံးလိုက်ပြီး ထိကပ်ထားသော နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကြားတွင် သူ့လျှာလေးအား ထိုးထည့်လိုက်သည်။ “အင်” ဆိုသော အသံလေး ကြားလိုက်ရပြီး သူ့လျှာက နန်းယမုံရဲ့နှုတ်ခမ်းလွှာနှစ်ဖက်ကို ဖြတ်သန်းပြီး ပါးစပ်လှလှထဲ ရောက်သွားသည်။
နန်းယမုံ ကိုယ်ကလေး ဆတ်ခနဲ တုန်သွားပြီး ဇွဲ၏ ရင်ခွင်ထဲမှ ရုန်းထွက်သည်။ အလိုက်သင့်ပင် သူလွှတ်ပေးလိုက်သည်။ သို့သော် နှုတ်ခမ်းချင်း မကွာသေးခင် သူမလျှာလေးအား သူ့လျှာနှင့် တစ်ချက်ရအောင် လှမ်းပွတ်ဆွဲလိုက်သည်။
“ရ .. ရပြီထင်တယ်” (အနည်းငယ် အသက်ရှူမမှန်သည့် အသံနှင့် နန်းယမုံ ဇွဲအား လှမ်းပြောသည်)
“နမ်းတာတော့ ရပြီ .. မမ ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ” (ကင်မရာ စကရင်ထဲက အရအမိ ရိုက်ထားသော ပုံကို ဇွဲ လှမ်းပြသည်)
“မမ မပြောတတ်ဘူး .. ဇွဲ”
နန်းယမုံ၏ မျက်လုံးတွေက စိတ်ရှုပ်ထွေးဟန်နှင့် မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေရှာသည်။ သူမကို လိုက်ကြည့်နေသော ဇွဲကိုတောင် တန်ပြန် မကြည့်နိုင်ရှာ။ နန်းယမုံ၏ အကြည့်က စားပွဲပေါ်တွင် တင်နေသော ဓါတ်ပုံများကို ငေးကြည့်သွားမိသည်။ ထိုခဏတာအတွင်း သူမ မျက်ဝန်းထဲတွင် အရောင်မျိုးစုံ လင်းလက်သွားသည်။
“မမ စိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင် ကျနော် အကြံတစ်ခုပေးမယ် .. “
“ပြော .. ဇွဲ .. ဘာလဲ ??”
သူ့ဆီက စကားသံကို ငံ့လင့်နေသလို နားစိုက်ထောင်နေသော နန်းယမုံ အမူအရာကြောင့် ဇွဲ အချီကြီး ကြံဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ အသက်ကို ပြင်းပြင်း အရင်ရှူသွင်းပြီး လေသံမှန်အောင် ထိန်း၍ သူအဖြစ်ချင်ဆုံး အရာတစ်ခုကို အကြံပြုလိုက်သည်။
“မမ ဝတ်စုံရဲ့ အပေါ်ပိုင်းကို ခန ဖယ်လိုက်ပါလား”
ဒီစကားကြောင့် နန်းယမုံ၏ လက်က သူ့ပါးပေါ် ဖြောင်းခနဲ ကျလာမလားဟု ဇွဲ ရင်တထိတ်ထိတ်နှင့် စောင့်ကြည့်နေလိုက်သည်။ သို့သော် သူထင်သလို မဖြစ်ပါ။ နန်းယမုံ၏ ပုံစံက တွေဝေတွန့်ဆုတ်နေဟန်သာ ရှိသည်။ မထူးတော့သည့်အဆုံး ဇွဲလည်း ဆေးတစ်လုံးလောက် ထပ်ထိုးပေးလိုက်သည်။
“ဘော့စ်နဲ့ ချောချောငယ်တို့ကို ပိုပြီး ဆွေ့ဆွေ့ခုန်တဲ့အထိ ဒေါသထွက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နမ်းတဲ့အဆင့်ထက် ပိုမှ ဖြစ်မယ် .. မမ”
ဇွဲ၏ ဒီစကားက တော်တော် တာသွားပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဘော့စ်နှင့် ချောချောငယ်ဆိုသော အသုံးက နန်းယမုံ၏ စိတ်ကို ဆွပေးလိုက်ဟန်ရှိသည်။ တစ်ခုခုကို ဆုံးဖြတ်လိုက်ဟန်နှင့် ခေါင်းကို ဆတ်ခနဲ ညိတ်ပြရှာသည်။
“ဟုတ်တယ် .. မင်းဘော့စ်က မမ ရင်သားတွေကို သိပ်ကြိုက်တာ .. တခြား ယောက်ျားတစ်ယောက်သာ ဒါတွေကို ထိတွေ့နေတယ်ဆို သေချာပေါက် ဒေါသထွက်လို့ နေရာမှာတင် နှလုံးရပ်သွားနိုင်တယ် .. ကောင်းပြီလေ .. မင်းပြောသလို လုပ်ကြတာပေါ့”
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်ကသာ ဒီစကားကို ဇွဲကြားမည်ဆိုလျှင် ပျော်လွန်းလို့ ထပဲခုန်မိမလား၊ နောက်ကျွမ်းတွေဘာတွေပဲ ထိုးမိမလား မသိ။ အခုတော့ ရင်ထဲအပျော်စိတ်ကို မျက်နှာပေါ် တက်မလာအောင် မနည်းထိန်းနေရသည်။ ထိုသို့ မိမိခံစားချက်ကို ရုပ်တည်ကြီးနှင့် ထိန်းသိမ်းရသည်မှာလည်း ကြီးစွာသော ဒုက္ခဆိုသည်ကို စာဖတ်သူလည်း ဇွဲနေရာရောက်လျှင် နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဇွဲတစ်ယောက် နေရာကနေ တုတ်တုတ်မျှကို မလှုပ်မိပါ။ သေချာသာ ကြည့်လျှင် သူ့တကိုယ်လုံးတွင် လှုပ်ရှားနေသာ အရာသည် နန်းယမုံ၏ လက်ကလေးများ လှုပ်ရှားရာသို့ ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ကြည့်နေသော မျက်ဝန်းများသာ ရှိနေပေသည်။ လည်တိုင်ကျော့ကျော့တွင် ပတ်ထားသော Halter Dress ၏ အစနှစ်ဖက်ကို ဖြုတ်လိုက်သည်နှင့် ရင်သားမို့မို့များအား စည်းနှောင်ထားသော အဖြူရောင်ဘရာက အပြင်ကို ထင်းထင်းလင်းလင်းပင် ထွက်လာသည်။ နန်းယမုံသည် ခေတ်မှီလွန်းလှသည်ကို ဒီနေရာတွင် ဇွဲ တွေ့လိုက်ရသည်။ သူမ ဝတ်ထားသော ဘရာသည် Lacy လို့ ခေါ်ရမည့် ဇာလွှာများဖြင့် ဖန်တီးထားသော ပုံဆန်းဘရာမျိုးဖြစ်သည်။ ဘရာတစ်ခုလုံးတွင် ဇာလွှာများက အများစု ဖြစ်သဖြင့် နို့လုံးဖွေးဖွေးတွေကို အတိုင်းသား မြင်နေရသည်နှင့် မခြားပါ။ နို့သီးခေါင်းလေးများကို မမြင်ရသည့်တိုင် ပန်းနုရောင် နို့ကွင်းဝိုင်းလေးများကိုတော့ ရိုးတိုးရိတ်တိတ် မြင်နေရသေးသည်။
“၀ိုး !!” (အံ့သြမှုကို မထိန်းနိုင်ဘဲ ဇွဲ ရေရွတ်မိသွားသလို၊ လက်ထဲကိုင်ထားသော ကင်မရာ၏ ခလုတ်ကိုလည်း ကလစ်ခနဲ မြည်အောင် နှိပ်မိသည်)
“၀ိုး လုပ်မနေနဲ့ … ဇွဲ .. လက်နဲ့ကိုင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ မြန်မြန်လာရိုက်”
ဘာပြောကောင်းမလဲ။ ဒါမျိုးတော့ ဇွဲတို့အတွက် နှစ်ခါပြန် ဖိတ်ခေါ်နေစရာမလို။ မသိမသာတုန်နေသော လက်တွေနှင့်ပင် ရင်သားဖွံ့ဖွံ့ထွားထွား တစ်ဖက်ကို ဘရာပေါ်ကနေ လှမ်းကိုင်လိုက်သည်။ ကြီးမားသလောက် အိစက်နွေးထွေးသည့် အထိအတွေ့က သူ့လက်ဖဝါးပြင်ပေါ်သို့ ကူးစက်ကာ ရောက်လာသည်။ နန်းယမုံ၏ နို့လုံးကြီးတစ်ဖက်ကို ကိုင်ထားရင်း ဇွဲ ကျန်သည့်လက်တစ်ဖက်နှင့် ဓါတ်ပုံတွေ တဖြတ်ဖြတ် ရိုက်သည်။ စိတ်ထဲမှလဲ ဘာဖြစ်လို့ ဘော့စ်က ကင်မရာထောက်တံကို သိမ်းမထားတာလဲဟု လှမ်းအပြစ်တင်လိုက်သေးသည်။ ထောက်တံသာ ရှိလျှင် ကင်မရာကို အော်တိုချိန်ထားလိုက်ယုံသာ၊ ဒါဆို သူ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးနှင့် ဖျဲသီးအရွယ်ရှိသည့် နို့လုံးဖွေးဖွေးကြီးတွေကို အားရပါးရ ကိုင်တွယ်လို့ရမှာဖြစ်သည်။
နန်းယမုံ၏ နို့လုံးတွေကလည်း တကယ်ကို သဘောကျချင်စရာကောင်းပါသည်။ ဇွဲ၏ လက်တစ်ဖဝါးတောင် ကောင်းကောင်း မအုပ်နိုင်ချင်။ နူးညံ့မှုနှင့်အတူ အိတင်းမှုကလည်း ထပ်တူတွဲ၍ ရှိနေသည်။ တော်တော်တော့ ဖော်ပြရခက်သော အတွေ့ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုအတွေ့က တပ်မက်မောဖွယ်ရာ အပြည့်လည်း ဖြစ်နေသဖြင့် ဇွဲတစ်ယောက် ကိုင်ထားလျက်က မသိမသာပင် ညှစ်မိသွားသည်။ နန်းယမုံ ကိုယ်က တွန့်သွားပြီး ဘရာပေါ်က သူ့လက်ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။
“ဓါတ်ပုံတွေပြဦး .. ဇွဲ”
မလွှတ်ချင်လွှတ်ချင်နှင့် လွှတ်ပေးလိုက်ရသည့် ဇွဲ .. ကင်မရာကို ထိုးပေးလိုက်သည်။ နန်းယမုံက ကင်မရာကို ကြည့်နေခိုက်၊ သူ့မျက်လုံးတွေကမူ နို့လုံးအိအိကြီးတွေထံပါးမှ တစ်ချက်ကလေးမှ မလွှဲ။ မျက်တောင်တောင် ခတ်မိရဲ့ လား မသိ။
ကင်မရာကို ဇွဲလက်ထဲ ပြန်ပေးလိုက်ပြီးနောက် နန်းယမုံက အလုပ်စားပွဲကြီးနားသို့ ကပ်သွားသည်။ ဝတ်စုံ၏ အပေါ်စနှစ်စကိုလည်း လည်တိုင်မှာ ပြန်ပတ်လိုက်ရာ ဇွဲ အလွန်အမင်း တပ်မက်နေသော ရွှေရင်ဖွေးဖွေးကြီးတွေက သူ့မြင်ကွင်းမှ ပျောက်သွားသည်။ ကလေးငယ်တစ်ယောက် သကြားလုံးဗူးပျောက်သွားသလို ဇွဲ ခံစားလိုက်ရသည်။ ဟုတ်သည်လေ။ ဒီအလုံးဖွေးဖွေးကြီးတွေကို အားရပါးရမှ မနယ်ရသေးတာ ..။
“ကျ .. ကျနော်တို့ ပြီးပြီလား မမ”
မနေနိုင်တော့သည်အဆုံး သူ့ကို ကျောပေးကာ ထားသည့် နန်းယမုံကို နောက်ကနေ လေသံတိုးတိုးလေးနှင့် မေးမိသည်။ နန်းယမုံက ဇွဲကို ချက်ချင်း ပြန်အဖြေမပေးပါ။ စားပွဲပေါ်တွင် ရှိနေသော ဦးမိုးလုံးဟိန်းတို့အတွဲ၏ ဓါတ်ပုံတွေကို စူးစိုက်ကြည့်နေသည်။ တအောင့်နေမှ
“မပြီးသေးဘူး .. ပြီးဖို့ အဝေးကြီးလိုသေးတယ် .. ဇွဲ”
“ဇွဲ .. အဲဒီ ကင်မရာနဲ့ မူဗွီရိုက်လို့ရလား”
“ရတယ် .. မမ” (နန်းယမုံ စိတ်ထဲတွင် ဘာတွေးနေသည်ကို ဇွဲ မခန့်မှန်းမိပေမယ့် ချက်ချင်းခေါင်းညိတ်ကာတော့ အဖြေပေးလိုက်သည်)
“အိုကေ .. ကောင်းတယ် .. ဒါဆို အခုစပြီး ရီကော့လုပ်လိုက်”
ပြောပြီးသည်နှင့် နန်းယမုံက ဇွဲရှေ့သို့ လျှောက်လာသည်။ သူမဘာလုပ်မှာလဲဆိုတာ မသိခင်မှာပင် သူ့ရှေ့တွင် ဒူးထောက်၍ ထိုင်ချလိုက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ အံ့အားသင့်ပြီး ဇွဲ ငုံ့ကြည့်မိခိုက် နန်းယမုံ၏ သွယ်ပြောင်းသော လက်တစ်စုံက ဘောင်းဘီခါးပတ်ခေါင်းအား လှမ်းကိုင်လိုက်သည်။
“မ .. မ .. ဘာလုပ်မလို့လဲ”
“မေးမနေနဲ့ … မင်း .. မင်းကောင်မ အတွက် ပြန်တုံ့ပြန်ချင်တယ် မဟုတ်ဘူးလား”
“အာ .. ဟုတ် … အိုကေ”
ကင်မရာကို ကိုင်ထားရင်းနှင့် ဇွဲ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ရပ်ပေးနေလိုက်သည်။ လှုပ်ရှားစရာ ရှိသမျှ နန်းယမုံကသာ ဦးဆောင်၍ ပြုလုပ်သည်။ ဘောင်းဘီက သူ့ခြေရင်းတွင် ပုံသွားသောအခါ နန်းယမုံလက်က ဖောင်းဖောင်းကြီးဖြစ်နေသော အတွင်းခံဆီသို့ ရောက်လာသည်။ ဇွဲ .. ကင်မရာ၏ mode ကို ဗွီဒီယိုသို့ ပြောင်းလိုက်ပြီး စတင် ရိုက်ကူးသည်။ အရင်ဆုံး ကင်မရာမြင်ကွင်းထဲတွင် ပေါ်လာတာက ဖြူဖွေးသွယ်တန်းသော လက်ကလေး၊ ထိုလက်ကလေးရဲ့လက်သူကြွယ်နေရာတွင်တော့ တလက်လက်တောက်နေသော စိန်လက်စွပ် .. နန်းယမုံရဲ့ လက်ထပ်လက်စွပ်၊ ဖောင့်ဖယောင်းပမာ လှပသော သူမရဲ့ လက်ချောင်းကလေးများနှင့် ထိစပ်နေသည်က အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်က သူ့လီးကြီး။ ဇွဲတစ်ယောက် နားထင်တွေ ရှိန်းခနဲ ဖြစ်လာသည်အထိ ခံစားလိုက်ရသည်။
“အိုး .. အမေ့ !!”
ယောက်ျားတွေ၏ လိင်အင်္ဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး နန်းယမုံ မည်မျှ အတွေ့အကြုံရှိသည်တော့ မသိ။ သူ့လီးအား ဘောင်းဘီကြိုးကို ဖယ်၍ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်တွင် ယောင်ယမ်း၍ ရေရွတ်လိုက်သံလေးကမူ ဇွဲအတွက် နားဝင်ချိုလှသည်။ စာတွေမှာ ရေးထားသည့်အတိုင်းသာဆိုလျှင် ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် ပြန်ဆိတ်ကြည့်ရမည့်ကိန်း။ ဒါအိပ်မက်များလား .. ကိုယ်တိုင်မြင်နေရသည့် ကိုယ့်မျက်လုံးတွေကိုတောင် မယုံနိုင်ပါ။ တကယ်ကို (absolutely gorgeous) ဖြစ်သည့်၊ ဆက်ဆီကျလှသည့် မမလှလှ နန်းယမုံ၏ လက်ထဲတွင် သူ့လီးက ရောက်ရှိနေသည်။
“မမ မျက်နှာကို ပါအောင် ရိုက်ဦး .. အဲဒီတော့မှ မင်းလီးကို ကိုင်ထားတာ မမဖြစ်မှန်း ဒင်း သိမှာ”
လီးကိုကိုင်၍ ဖြေးဖြေးသာသာ ဆုပ်စွဲနေသော လက်ကစ၍ တဖြေးဖြေးခြင်း ကင်မရာကို နန်းယမုံ၏ မျက်နှာရှိရာသို့ ရွှေ့သွားသည်။ နန်းယမုံ၏ လှပသော မျက်ဝန်းတွေထဲတွင် ထူးဆန်းသည့် အရိပ်အယောင်တွေ လဲ့ဖြာနေသည်။ သူမ ဘာတွေ တွေးနေလဲဆိုတာကို ဇွဲ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ အချိန်မအားပါ။ အပေါ်စီးကနေပြီး လှမ်းမြင်နေရသော နို့လုံးဖွေးဖွေးတွေ၏ ထိပ်ပိုင်းအား ကင်မရာကို zoom ဆွဲ၍ လှမ်းချိန်လိုက်သည်။
“အား .. ရှစ် .. ကောင်းတယ်”
မာကြောနေပြီဖြစ်သော လီးတန်ကို လက်တစ်ဖက်နှင့် ဆုပ်ကာ ဂွင်းတိုက်ပေးနေရာမှ၊ နန်းယမုံက ကျန်နေသည့် လက်တစ်ဖက်နှင့် သူ့ဂွေးဥတွေကို ရွရွလေး လှမ်းကိုင်သည်။ လက်ဖဝါးလေးထဲတွင် ထည့်ပြီး လက်ချောင်းလေးများဖြင့် မာဆက် လုပ်သလို နှိပ်နယ်ပေးသောအခါ ဇွဲတစ်ယောက် မျက်လုံးများ မှေးကျသည်အထိ ဖီလင်တက်သွားသည်။ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘဲ ကင်မရာ မကိုင်ထားသည့်လက်နှင့် နီးစပ်ရာ နို့ကြီးတစ်လုံးကို လှမ်းဆွဲမိ၏။
“ဆောရီး .. မမ”
“ရတယ် .. ကင်မရာကို သေချာကြည့်ဦး”
“ဟုတ် .. မမ သေချာရိုက်ထားတယ်”
ခံစားမှုဖီလင်နောက်သို့ မျောသွားသည့် ဇွဲ .. နန်းယမုံ၏ သတိပေးသံကြောင့် ကင်မရာကို တည်ငြိမ်အောင် ပြန်ထိန်းကိုင်လိုက်သည်။ အောက်ကိုငုံ့ကြည့်လိုက်သည့်သူနှင့် အပေါ်ကို မော့ကြည့်နေသော နန်းယမုံ အကြည့်ချင်းဆုံသွား၏။ သူကြည့်နေခိုက် နန်းယမုံတစ်ယောက် အသက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက် ရှူလိုက်သည်ကို သတိထားမိသည်။
“ဇွဲ .. မနက်ကတုန်းက မင်း ရေချိုးလာခဲ့တယ် မှတ်လား”
“ဟုတ်တယ် .. မမ … ဘာဖြစ်လို့လဲ” (သူ့ကိုယ်ကများ အနံ့အသက် ထွက်နေလို့လားဟု ဇွဲ တွေးမိသည်။ သို့သော် သူ့အတွေးမှားသည်ကို ချက်ချင်း သိလိုက်လေသည်)
“မိုး .. လုံး .. ဟိန်း .. ကျမ လုပ်သမျှကိစ္စတွေ အားလုံးဟာ ရှင့်ကြောင့်ဖြစ်လာတာ .. ရှင့်အပြစ်တွေကြီးပဲ”
ကင်မရာကိုကြည့်ကာ ပြောသော ထိုစကားအဆုံးသတ်နှင့်အတူ နန်းယမုံ၏ နှုတ်ခမ်းလှလှလေးက ဟသွားပြီး လျှာနီနီချွန်ချွန်လေးက ထွက်လာကာ ဒစ်လုံးကြီးကို လှမ်းလျက်သည်။ ဒစ်ထိပ်နှင့် စိုစွတ်သော လျှာထိပ်လေး ထိမိမှုက နန်းယမုံလက်ထဲရှိ လီးတန်ကို ထောင်းခနဲ ရုန်းထစေသည်။ ထိပ်ဖူးဝတွင် စို့ထွက်နေသော အရည်ကြည်လေးက နန်းယမုံ၏ လျှာဖျားလေးတွင် တွဲခို၍ ပါသွားသည်။
“ကောင်းတယ် .. မမရယ် .. ကောင်းတယ် .. လျက် လျက်ပေးပါဦး”
ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့် မာနေပြီဖြစ်သော လီးတန်ကြီး၏ အရင်းပိုင်းကို လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးနောက် လွတ်ထွက်နေသည့် ထိပ်ပိုင်းတလျှောက် နန်းယမုံ၏ လျှာနီနီလေးက ရွေ့လျားနေသည်။ အောက်ဆင်းသွားလိုက်၊ အပေါ်တက်လာလိုက်နှင့် အစုန်အဆန် လှုပ်ရှားပြီးနောက်၊ ထိပ်ဖူးလုံးကြီးဆီ ပြန်အရောက်တွင် ပါးစပ်ကို အစွမ်းကုန်ဟ၍ ငုံ့လိုက်သည်။ ထို့နောက် ခေါင်းကို ဖိချလိုက်သည်တွင် နူးညံ့သောနှုတ်ခမ်းလေးများကို တွန်းတိုက်၍ လီးဒစ်က ပါးစပ်ပေါက်ထဲသို့ ဝင်သွားသည်။
“အား .. အရမ်းကောင်းတယ် … မမ”
ပြွတ်ခနဲ မြည်သံနှင့်အတူ လီးထိပ်က နန်းယမုံ ပါးစပ်အတွင်းမှ ပြန်ထွက်လာသည်။ လီးကို ၉ဝဒီဂရီထောင်မတ်နေအောင် ကိုင်ထားရင်း လက်ဖဝါးနှင့်ဆုပ်ကာ ဂွင်းတိုက်ပေးသည်။ မျက်နှာလှလှလေးက မော့တက်လာပြီး ဇွဲအား ထင်မှတ်မထားသည့် မေးခွန်းတစ်ခုကို မေးလိုက်သည်။
“မမနဲ့ မင်းကောင်မ .. ဘယ်သူစုပ်ပေးတာ ပိုကောင်းလဲ”
ဇွဲ၏ အသိအာရုံတွင် လောလောဆယ် ကြီးစိုးထားသည်က နန်းယမုံသာ ရှိသဖြင့် သူ့ကောင်မဆိုသော ရည်ညွှန်းချက်ကို မနည်းတောင် ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရသည်။ နောက်တော့မှ ချောချောငယ်ကို ပြောမှန်းသိလိုက်သည်။ ချောချောငယ်ရဲ့အစုပ်အမှု (ဘလိုးဂျော့)က ဘယ်လောက်ကောင်းသည်မှန်း ဇွဲ မသိ။ သို့သော် နန်းယမုံ၏ ဘလိုးဂျော့က မတရားကောင်းနေသည်မှန်းတော့ ဇွဲ သိနေသည်။
“မမက ပိုကောင်းတာပေါ့” (ဇွဲ စိတ်ထဲမှာတော့ သေချာသိအောင် နှစ်ယောက် ပြိုင်တူ စုပ်ပေးတာ ခံရလျှင် ကောင်းမည်ဟု ဖြတ်ခနဲ တွေးလိုက်သေးသည်)
နန်းယမုံကတော့ ဇွဲ၏ အတွေးကို သိနိုင်စွမ်း မရှိပါ။ သူမက ပိုသာသည်ဆိုသောအချက်ကြောင့် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားသည့် အသွင်ပြောင်းသွားပြီး ခေါင်းကို ချက်ချင်းပင် ပြန်ငုံ့၍ လီးကို အားရပါးရစုပ်သည်။ ကောင်းမွန်လှသည့် ခံစားချက်များက လီးတန်တလျှောက်မှ တဆင့် ဇွဲ ကိုယ်အနှံ့ ပြန့်၍ စီးဝင်သွားသည်။ လက်တစ်ဖက်နှင့် နန်းယမုံ၏ ခေါင်းကို လှမ်းကိုင်ပြီး ဖိချမိသည်။ နူးညံ့အိထွေးသော ပါးစောင်သားလေးများ၏ အထိအတွေ့ကြောင့် လီးတန်တစ်ချောင်းလုံးကို နန်းယမုံ ပါးစပ်ထဲ သွင်းပစ်လိုက်ချင်တော့သည်။
“အား .. ကောင်းတာ မမ”
“မမ .. ဒိသရုပ် လုပ်ဖူးလား ??”
နန်းယမုံ ကိုယ်လုံးလေး ဆတ်ခနဲ တုန်သွားပြီး၊ ပါးစပ်ထဲမှလည်း လီးတန်က ကျွတ်ထွက်လာ၏။ ခေတ်မှီသည့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မို့ ဒိသရုပ်ဆိုသည်မှာ လိင်တန်ကို အဆုံးထိ ပါးစပ်ထဲသို့ သွင်း၍ စုပ်ပေးခြင်းမှန်း နန်းယမုံ နားလည်ပါသည်။ သို့သော် သူမယောက်ျား ဦးမိုးလုံးဟိန်းနှင့်တောင်မှ ဒီလိုမျိုး တခါမှ မစမ်းဘူးပါ။ ဦးမိုးလုံးဟိန်း၏ လိင်တန်ကို စုပ်ပေးသည်ဆိုတာကလည်း အမြဲတမ်းရယ်လို့ မဟုတ်။ သူမ စိတ်ပါသည့်အချိန်နှင့် ဦးမိုးလုံးဟိန်း အလွန်အမင်း ဆန္ဒရှိချိန်သာ ဖြစ်သည်။ အခုတော့ သူမယောက်ျား၏ လူယုံကောင်လေးက သူ့လီးကို ဒိသရုပ်လုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေပြီ။ သူမ ဘာလုပ်ရမည်နည်း …. ။
ကင်မရာ ကိုင်ထားသော လက်ကို သူ့မျက်နှာဘက်သို့ လှည့်လိုက်ပြီး ဇွဲတစ်ယောက် မခိုးမခန့် ပြုံးရင်း စကားကို တစ်လုံးချင်း ပြောနေသည်။
“ဒီမှာ ဘော့စ် .. ခင်ဗျား မိန်းမရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို ခင်ဗျား လီးအကုန် သေချာပေါက်မထည့်ဖူးဘူး မှတ်လား .. ဘယ်ထည့်ရမလဲ .. ခင်ဗျားကြီးက သူ့နောက်ကွယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတာကိုး .. အခု ခင်ဗျား မရတဲ့ အခွင့်အရေးကို ကျနော် ရပြီ .. မမ က ကျနော့်လီးကို ဒိသရုပ်လုပ်ပေးတော့မယ် … ဒီမှာ ကြည့် ..”
ဇွဲပြောလိုက်သည့် စကားတွေ အားလုံးကို လုံးစေ့ပတ်စေ့ နန်းယမုံ ကြားလိုက်ပါသည်။ သူမ ဦးနှောက်က ထိုအချက်များကို လက်ခံသင့်၊ လက်မခံသင့် ဝေခွဲမရဖြစ်နေသည်။ သို့သော် ဇွဲ၏ လက်က သူမခေါင်းကို အသာကိုင်ပြီး ဖိချလိုက်သည်တွင်တော့ ပါးစပ်ကို အလိုလိုဟပေးမိသွားသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ သူမ၏ သဘာဝဗီဇ (natural instinct) က ကြီးစိုးသွားပြီး နှုတ်ခမ်းများကို လီးတန်လုံးပတ်၏ အောက်ခြေပိုင်းနှင့် ထိနိုင်အောင် ကြိုးစားလိုက်သည်။ ထိပ်ဖူးလုံးလုံးကြီးက အာခေါင်ကို ကျော်၍ လည်ချောင်းဝသို့ ရောက်လာသောအခါ ပျို့ ချင်သလို ဖြစ်သည်။ အသက်ရှူရခက်သလို ဖြစ်သည်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြန်ထုတ်လိုက်သည့်တိုင် ချောင်းတဟွတ်ဟွတ် ဆိုးသည်။
“အားမလျှော့နဲ့ မမ ရတော့မှာ … နဲနဲပဲ လိုတော့တာ”
တကယ်တော့ တော်တော်လိုပါသေးသည်။ ဇွဲ လုပ်ခဲ့ဖူးသမျှ ကောင်မလေးတိုင်းတောင်မှ ဘယ်သူမှ သူ့လီးကို အကုန်ငုံနိုင်တဲ့သူ မရှိခဲ့ပါ။ သို့သော် ဇွဲ၏ အားပေးမှုကို နန်းယမုံက အသိအမှတ်ပြုဟန်နှင့် ခေါင်းညိတ်ပြပြီး လက်ခံသည်။ ပြီးနောက် အသက်ကိုဝဝရှူသွင်းလိုက်ပြီး သူမပါးစပ်ကို လီးထိပ်ဖူးအား ပြန်ငုံ၍ ဖိချလိုက်ပြန်သည်။
အသက်ကိုဝအောင် ရှူထားခဲ့သည့်အတွက် လီးဒစ်က လည်ချောင်းထဲဝင်လာသည့်အချိန်တွင် အစောတုန်းကလို မဖြစ်တော့။ ပျို့ချင်သလို ဖြစ်နေသည့် အခံတော့ ရှိနေသေးပေမယ့် ထိုစိတ်ကို ထိန်းပြီး လည်ချောင်းအတွင်းသားတွေကို ဖြေလျှော့ကာ ငှက်ပျောသီး မျိုချသလို မျိုလိုက်သည်။ လီးတန်လုံးပတ်ကို ဖိပွတ်နေသော နှုတ်ခမ်းသားများက အောက်ဘက်သို့ ရွေ့သွားပြီး နန်းယမုံ၏ နှာတံချွန်ချွန်လေးက လီးအရင်းတွင် ပေါက်နေသော အမွှေးတွေနှင့် ရောယှက်သွားသည်။ သူမ မေးလေးကမူ ဖောင်းကားနေသာ ဂွေးဥများနှင့် သွားထိသည်။
“၀ိုး … ရေး .. မိုက်တယ် မမ”
ဇွဲတစ်ယောက်တော့ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်သို့ အရှင်လတ်လတ် ရောက်နေသလိုကို ခံစားရသည်။ နန်းယမုံ၏ ခေါင်းကို နောက်ဘက်မှ ထိန်းကိုင်ထားရင်း ချက်ချင်း ပြန်ကြွတက်မလာအောင် စက္ကန့်ပိုင်းလောက် ဖိထားသည်။ လီးဒစ်ဖူးနှင့် လည်ချောင်းသားအိအိတွေ ထိတွေ့နေမှုသည် ပြောမပြနိုင်အောင် ကောင်းလွန်းလှသည်။ ခနကြာမှ ဖိထားမှုကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်။
“မမ .. လုပ်နိုင်တယ် .. ရေး !!!”
အင်မတန်မှ ကျေနပ်အားရသံနှင့် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြွေးကြော်နေသည့် နန်းယမုံကြောင့် ဇွဲတောင် အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ပြီး အသံတိတ်သွားရသည်။ သူမ စုပ်နေသော လီးသည် ဘယ်သူ့လီးဆိုတာကိုရော နန်းယမုံတွေးမိပါရဲ့လား မသိ ..။
နောက်ထပ်ဘာမှ ထပ်မံတိုက်တွန်းစရာ မလိုလိုက်ဘဲ နန်းယမုံက သူ့လီးကို ပြန်၍ ငုံစုပ်သည်။ ဒီတစ်ကြိမ်တွင်တော့ နည်းစနစ်ကို သိနားလည်သွားပြီ ဖြစ်သည်မို့ တစ်ချက်ထဲနှင့်တင် လီးက သူမပါးစပ်ထဲ ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ နန်းယမုံ၏ နှာတံလေးက လီးမွှေးများကြား ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည်။ နှာဝထဲသို့ လီးမွှေးအချို့ကပင် တိုးဝင်သွားရာ သူမ နှာခေါင်းကို ဘယ်ညာလှည့်ကာ ကစားပြီး ဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။
“အိုး .. ရှစ်”
ဇွဲတစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့။ သူ့လိင်တန်သည် သံချောင်းတစ်ချောင်းလို တင်းမာနေပြီး၊ အချိန်ကိုက် ဗုံးသလို ပေါက်ကွဲဖို့ အသင့်ဖြစ်နေသည်။ နန်းယမုံ၏ ခေါင်းကို ဖမ်းကိုင်ပြီး ခါးကိုလှုပ်ကာ သူမပါးစပ်အား ဆောင့်လိုးမိတော့သည်။ နန်းယမုံက အလိုက်သင့်ပင် လည်ချောင်းကို ဖြေလျှော့ထားပေးယုံမက၊ လျှာလေးနှင့်လည်း အဝင်အထွက် ဖြစ်နေသော လီး၏ အောက်ဘက်ပိုင်းကို ပတ်၍ လျက်ပေးသည်။ နူးညံ့လှသော နန်းယမုံ၏ ပါးစပ်လှလှလေးထဲတွင် လီးတစ်ချောင်းလုံး ကုန်အောင် ထည့်ထားနိုင်သည့် ဖီလင်သည် ဇွဲအတွက်တော့ ဘာနှင့်မှကို မလဲနိုင်ပေ။
သူမပါးစပ်အား အရှိန်နှင့်လိုးနေသော ဇွဲအား မိနစ်ပိုင်းမျှ ကြာသည်အထိ နန်းယမုံ လွှတ်ပေးထားလိုက်၏။ နန်းယမုံ အနေနှင့် အစပိုင်းတုန်းက သူမအပေါ် ဖောက်ပြန်သည့် လင်ဖြစ်သူအား ပညာပေး လက်စားချေဖို့ရန် ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့သော်လည်း ဒီလောက်အထိတော့ ဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဟု မထင်ထားခဲ့။ အခုတော့ ဖြစ်ခဲ့သမျှကို နောက်ကြောင်းပြန်ဖို့ မလွယ်ကူတော့ပါ။ သူမအနေနှင့်လည်း ဒီအခြေအနေရောက်လာမှ နောက်ဆုတ်ဖို့လည်း မစဉ်းစားချင်တော့။ ရှေ့ဆက်တိုးဖို့ရန်သာ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သည်။
“ဇွဲ .. နေဦး”
ပြွတ်ဆိုသည့် အသံနှင့်အတူ လီးက ပါးစပ်ပေါက်ထဲမှ ကျွတ်ထွက်သွားရာ ဇွဲတစ်ယောက် တကယ်ကို ဖီးလ်အောက်သွားသည်။ နောက်ထပ် တစ်မိနစ်၊ နှစ်မိနစ်သာ ဆက်ဆောင့်ရလျှင် သူပြီးတော့မှာ သေချာနေသည်လေ။
“ဘာ .. ဘာဖြစ်လို့လဲ မမ??”
အနည်းငယ် စိတ်ပျက်သံနှင့် မေးလိုက်သည့် ဇွဲ .. နန်းယမုံထံမှ အဖြေကြောင့် နေရာမှာတွင် ထခုန်ချင်သွားပြန်သည်။ အနည်းဆုံး (at least) တော့ လူက မခုန်မိတာတောင် လီးတန်ကြီးက ဆတ်ခနဲ ခုန်တက်သည်။
“တို့တတွေ ဖက်ခ် ကြရအောင် .. ဇွဲ”
“မမ .. တကယ် ပြောနေတာလား” (အံ့အားသင့်ပြီးရင်း သင့်နေရသော ဇွဲ .. ဒီတခါတော့ သူ့မျက်လုံးတွေ ပန်းကန်ပြားဝိုင်းလောက် ကြီးသွားသည်ဟု ဆိုလို့ရသည်)
“တကယ်ပြောနေတာ .. ဇွဲ .. ဒါ နောက်စရာ မဟုတ်ဘူး”
ကြောင်တက်တက်နှင့် ကြည့်နေသော ဇွဲအား ခပ်ငေါက်ငေါက်လှမ်းပြောရင်း နန်းယမုံ ဒရက်စ်(ဝတ်စုံ)ရဲ့အောက်အနားစကို လှမ်းဆွဲကာ ခါးထက်သို့ မတင်သည်။ ကြီးမားဖွေးဥသော တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်သည် ခပ်သေးသေး ပင်တီက ဖုံးမထားနိုင်သည့်နှယ် လုံးမောက်ကာ ပေါ်ထွက်လာသည်။ သူစိတ်ကူးယဉ်ထားသလို ဂျီစထရင်း ဝတ်ထားတာ မဟုတ်သည့်တိုင် ပင်တီသေးသေးလေးက တင်ပါးအထက်ပိုင်းကိုသာ ဖုံးထားနိုင်သည့် ဆက်ဆီကျသည့်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဇွဲ၏ လီးက ဆတ်ခနဲ ထခုန်ပြန်သည်။ မနည်းပင် ဖင်ကျောတွေကို အမြန်ရှုံ့လိုက်ရပြီး လရည်မထွက်အောင် ထိန်းထားရသည်။
“မင်း .. သန့်တာတော့ သန့်တယ် နော် ..”
“အာ .. သန့်တယ် မမ .. ဒါပေမယ့် မမ အဆင်မပြေရင် ကျနော့်ဆီမှာ ကွန်ဒုံးရှိတယ်”
“ဒါဆို ယူလိုက်လေ .. ဘာလုပ်နေတာလဲ .. မြန်မြန်လုပ် … အချိန်မရှိဘူး”
“ဟုတ် .. ဟုတ် .. မမ .. လာ .. လာပြီ”
ဇွဲတစ်ယောက် ကမန်းကတမ်း ကြမ်းပြင်ပေါ်ပုံနေသော ဘောင်းဘီကို ပြေးကောက်၊ အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံအိတ်ကို ထုတ်၊ အိတ်အလယ်ခေါင်က ဇစ်ကို ဖွင့်ပြီး တစ်ခုထဲသာ ကျန်နေသည့် ကွန်ဒုံးကို မြန်မြန်ထုတ်ယူရသည်။ ကွန်ဒုံးအိတ်ထောင့်ကို ပါးစပ်နှင့်ကိုက်ကာ ဆွဲဖောက်လိုက်ပြီး အစွန်းစထွက်လာသော အကြည်ပြားလေးကို လီးထိပ်တွင်စွပ်ကာ လိပ်ချလိုက်သည်။
“နေဦး !! .. ကင်မရာနဲ့ ချိန်ရိုက်ထားဖို့ မမေ့နဲ့ဦး”
ကွန်ဒုံးစွပ်ပြီးသည်နှင့် သူမနားသို့ ပြေးကပ်တော့မလို ဖြစ်နေသည့် ဇွဲအား နန်းယမုံ လှမ်းသတိပေးရသည်။ သူမ သတိပေးလို့သာ တော်တော့သည်။ အခုအချိန်တွင် ဇွဲ စိတ်ထား၌ ကင်မရာရိုက်ကူးဖို့ ကိစ္စ လုံးဝရှိမနေပါ။ စားပွဲစွန်း၌လက်ထောက်ကာ နေရာယူထားသဖြင့် လုံးဝန်းပြီးထွက်နေသော ပန်းသီးပုံစံဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ရမည့် တင်သားဖွေးဖွေးကြီး နှစ်ဖက်ကသာ ကြီးစိုးထားသည်။
“ရပြီ .. မမ”
ကင်မရာကို ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ အလှစိုက် ပန်းအိုးပေါ်တွင် သွားပြေးတင်ပြီးနောက် နန်းယမုံ ဖင်ပေးထားရာနေရာသို့ ဇွဲ ရောက်လာသည်။ လှန်တင်ထားသော ဒရက်စ်(ဝတ်စုံ)စ လိပ်ကာ ဖုံးနေသည့် ခါးကျင်ကျင်လေးကို ဇွဲ လက်တစ်ဖက်နှင့် ဆုပ်ကိုင်ရင်း၊ နောက်တစ်ဖက်က လီးတန်ကို ထိန်းကာ စောက်ဖုတ်ဝတွင် တေ့လိုက်သည်။ နန်းယမုံကလည်း အလိုက်သင့်ပင် တင်ပါးကို ကော့ကာ ကုန်းပေးထားသည် ဖြစ်ရာ အရည်ကြည်စို့နေသော အဝလေးနှင့် ကွန်ဒုံးစွပ်ထားသော ဇွဲ၏ လီးထိပ်တေ့မိသည်။ ဇွဲ သုံးလေ့ရှိသော ကွန်ဒုံးက လု (lube) ပါသော အမျိုးအစားမို့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး တွေးမနေတော့ပါ။ နေရာမှန်သည်ကို သိသည်နှင့် ဖိကာ သွင်းပစ်လိုက်သည်။
(အားပါးပါး .. ကျပ်လှချည်လား)
“အီး … အင့် … အင့်” (နန်းယမုံ ကိုယ်ကလေး ဆတ်ခနဲတုန်၍ ခေါင်းမော့ကာ မျက်လုံးတွေ မှေးစင်းကျသည်)
“ဒီမှာ ဘော့စ် .. ခင်ဗျားကြီးတွေ့ပြီ မှတ်လား … ကျုပ်လုပ်နေတာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ .. တွေ့တယ်ဟုတ် .. အဲဒါ ခင်ဗျား သစ္စာမရှိဘဲ ပစ်ထားတဲ့ မိန်းမလေ … ဟုတ်ပြီလား”
ကြီးမားတုတ်ခိုင်သောလီးကြီးက သူမကိုယ်တွင်းသို့ အဖုတ်ဝမှတဆင့် ပြည့်ကျပ်စွာ ဝင်လာမှုကြောင့် မျက်တောင်လေးများ မှေးစင်းကျသွားသူ နန်းယမုံ .. ဇောင့်ကြွားကြွားလေသံနှင့် လှမ်းပြောနေသူ ဇွဲ၏ စကားများကြောင့် ခြံခုန်တဲ့လင်ဖြစ်သူကို မကျေနပ်သည့်စိတ်တွေ ပြန်ထလာပြီး သူမတင်ပါးတွေကို နောက်သို့ တွန်းပို့ပစ်လိုက်သည်။ ဇွဲနှုတ်ဖျားမှ ကျေနပ်အားရစွာ ညည်းသံနှင့်အတူ လီးကြီးက ကျဉ်းကျပ်နေသော လမ်းကြောင်းတလျှောက် ပြေးဝင်သည်။ ဇွဲ၏ ဆီးစပ်နှင့် ဖြူဖွေးအိစက်သော တင်ပါးကြီးတစ်စုံ ထိကပ်သွားသည်။
“အိုး .. ရှစ် .. ကောင်းတယ်”
စူးစူးရှရှအော်ပြီး ကျေနပ်အားရသံအပြည့်နှင့် ရေရွတ်လိုက်သည့် နန်းယမုံစကားကြောင့် ဇွဲပင် အံ့အားသင့်ပြီး အဖုတ်ထဲအပြည့်ဝင်နေသော လီးကြီးအား ဘာမှမလုပ်ဘဲ ငြိမ်နေမိသည်။ ဇွဲကသာ ထိုသို့ ငြိမ်နေပေမယ့် နန်းယမုံကတော့ ငြိမ်နေခြင်း မရှိပါ။ သူမဖင်ကြီးတွေက တုန်ခါနေပြီး၊ အဖုတ်အတွင်းသားတွေကမူ ဇွဲ၏ လီးကို ပတ်ကာရစ်ဆွဲနေကြသည်။
“လိုး .. လိုးလေ .. ဇွဲ .. မမ ကို လိုး .. ဖက်ခ် မီ .. ပလိစ် !!”
သူ့ယောက်ျား စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်အောင်ပဲ နန်းယမုံ တမင်ပြောနေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့လီးကြောင့်ပဲ ဆန္ဒတွေ တက်ကြွလို့ လိုးခိုင်းတာလား ဇွဲ သေချာဝေခွဲမရပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအချက်တွေအား ဇွဲ ဂရုစိုက်မနေတော့ပါ။ လုံးဝန်းသလောက် တင်းရင်းအိစက်နေသည့် တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကာဆွဲကိုင်ပြီး အားကုန်ကို လိုးတော့သည်။ လီးက စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေကို ပွတ်တိုက်ပြီး ထွက်လာလိုက်၊ ဝင်သွားလိုက် ဖြစ်နေသည်။ တဖြောင်းဖြောင်းနှင့် ပြေးလွှားနေသော ပစ်စတင်ချောင်းနှင့်တောင် တူလှပေသည်။
နန်းယမုံ တင်သားတွေက တကယ်ကို ဖြူဖွေးကားစွင့်ကာ လုံးဝန်းလှသည်။ နောက်ကနေ ဒေါ့ဂီစတိုင်လ်နှင့် လိုးနေရသူ ဇွဲအဖို့ ဆောင့်ချက်တိုင်း တင်သားတွေ တုန်တက်သွားသည့် မြင်ကွင်း၊ အရည်ကြည်တွေ စိုနေသော လီးကြီး အဖုတ်ထဲ ပျောက်ကွယ်သွားသည့် မြင်ကွင်း၊ အဆီရယ်လို့ မရှိဘဲ ကျော့ရှင်းနေသော ကျောပြင်ထက်တွင် ဆံနွယ်လေးတွေ လှုပ်ခါသွားသည့်မြင်ကွင်း .. ရမ္မက်ကြွဖွယ်ရာ မြင်ကွင်းပေါင်း မျိုးစုံကို မြင်နေရသည်။ သို့သော် ထိုအရာများထက် ပို၍ သူ့စိတ်ကို ဖမ်းစားထားသည်က လီးအဝင်အထွက်ကို မြင်အောင် ဆိုပြီး ဖင်သားနှစ်ဖက်ကို လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဆွဲဖြဲထားမှုကြောင့် ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်နေသော စအိုပေါက် နီနီစူစူလေး။
နန်းယမုံသည် သူမကိုယ်သူမ ဂရုတစိုက်နှင့် အမြဲကျော့ရှင်းနေအောင် ပြင်ဆင်ထားလို့လား မသိ။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေရော ဖင်ကြား ၊ စအိုပေါက် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရော အားလုံးက အမွှေးအမှင်ကင်းပြီး ဖြူဖွေးသန့်စင်နေသည်။ အဖုတ်ကို အပီအပြင် ဆောင့်လိုးနေရင်းမှ ဇွဲတစ်ယောက် ဖင်ချချင်လာသည်။ နန်းယမုံကို ချရဖို့ အရေးက ဒီတစ်သက် ပြန်ရချင်မှ ရတော့မည်ဖြစ်ရာ ကြုံကြိုက်တုန်း ရှိရှိသမျှ အပေါက်အကုန်ဖွင့်လိုက်ချင်သည်။
“အင်း … အင့် .. မမ ကောင်းလာပြီ .. ဇွဲ .. ဆောင့် .. နာနာဆောင့်”
ကာမရမ္မက်ဇောတက်ကာ နန်းယမုံတစ်ယောက် အပီအပြင် ပေါက်ကွဲထွက်နေသည်။ မိမိယောက်ျားမဟုတ်တဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ ယောက်ျားသားတစ်ဦးက လီးကြီးကြီးနှင့် လိုးပေးတာ ခံနေရသည်မို့ ခံစားမှုအရှိန်ကလည်း ခါတိုင်းနှင့် မတူ။ တစ်သက်တာတွင် မကြုံဘူးသေးသည့် အတွေ့အကြုံနှင့် အကြီးအကျယ် ပြီးတော့ဖို့ နန်းယမုံ တဲတဲလေးသာ လိုတော့သည်။
“အင် .. အာ .. ဘာဖြစ်လို့ ဆွဲထုတ်လိုက်တာလဲ .. ဇွဲ”
အရမ်းကြီး ကောင်းနေသည့် အချိန်တွင် အဖုတ်ထဲမှ လီးဆွဲထုတ်ခံရသဖြင့် မဲ့တဲ့တဲ့ မျက်နှာလေးနှင့် နန်းယမုံ လှည့်ကြည့်ကာ မေးရှာသည်။ စားပွဲစွန်းအား ထောက်ထားသည့် လက်ဖြင့် လီးတန်ကြီးအား လှမ်းဆွဲမည်တောင် ပြုသည်။ ဇွဲကာ အဆွဲမခံဘဲ နောက်သို့ ခြေတစ်လှမ်းဆုတ်သည်။ တင်ပါးကြီး တစ်ဖက်ကို ကိုင်ထားသော လက်ကိုမူ စအိုပေါက်လေးပေါ် ရွှေ့ ပြီး လက်မနှင့် စူတူတူအဝလေးကို ဖိထိုးချသည်။
“မမ ယောက်ျားက မမဖင်ကို လုပ်ဖူးလား”
“အိုး .. နိုး .. မလုပ်ဘူး .. မလုပ်ဖူးဘူး”
နန်းယမုံ၏ စအိုပေါက်လေးက တင်းရင်းနေသော်လည်း ဇွဲက လက်မကို အားနှင့်ဖိချလိုက်သည်မို့ ထိပ်ပိုင်းလောက် ဝင်သွားသည်။ ချွေးသီးလေးတွေ စို့နေပြီ ဖြစ်သော နန်းယမုံကိုယ်ကလေး ဆတ်ခနဲ တုန်သွားပြီး လီးကို လှမ်းဆွဲသောလက်ကို ကမန်းကတမ်း စားပွဲပေါ်သို့ ပြန်ထောက်လိုက်ရသည်။ ဖင်ပေါက်နုနုလေးထဲသို့ ဝင်သွားသော သူ့လက်မကို အသာလေး လှုပ်ပေးရင်း ကင်မရာတင်ထားရာဘက်သို့ ဇွဲ လှမ်းကြည့်ကာ စပ်ဖြီးဖြီးရုပ်နှင့် ပြောသည်။
“ကဲ .. ဘော့စ် .. ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ဆုံးပိတ်အဖြစ် ခင်ဗျားကြီး တခါမှ မရောက်ဘူးတဲ့နေရာကို ကျနော့်လီးရောက်အောင် သွားလိုက်မယ် .. ဘယ်နေရာလဲဆိုတာ လက်မကို မြင်တယ် မှတ်လား .. မမနန်းယမုံရဲ့ဗါဂျင်ဖင်ပေါက်လေးပေါ့ဗျာ .. ဟား ဟား”
ဇွဲပြောနေသည့် စကားလုံးတိုင်းကို နန်းယမုံ ကြားပါသည်။ ယောက်ျားဖြစ်သူ၏ အလုပ်သမားက သူဌေးကတော်ဖြစ်သူ သူမကို ဖင်ချဖို့ ကြံစည်နေသည်ဆိုတာ နန်းယမုံ နားလည်ပါသည်။ သို့သော် အခုအခြေအနေတွင် သူမ ငြင်းဆန်ချင်စိတ်တစ်ခုမှ မရှိတော့ပါ။ အလျှံညီးညီး တောက်လောင်နေသည့် ရမ္မက်စိတ်တွင်၊ ဖောက်ပြန်သူ ယောက်ျားအပေါ် ခံပြင်းဒေါသထွက်မှုက ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ သူမလုပ်သမျှ အမှန်ဟု နန်းယမုံ ထင်မြင်နေသည်။ ဖင်မကလို့ ဘာကြီးပဲချချ .. ဇွဲ လုပ်ချင်တာလုပ်ဖို့ သူမ သဘောတူသည်။
“လုပ် .. ဇွဲ .. မမ ဖင်ပေါက်က မင်းအတွက်ပဲ .. ဒါမှ ဒင်းတို့ ကောင်းကောင်းမှတ်မှာ”
ဖင်ပေါက်ထဲသို့ ဝင်နေပြီ ဖြစ်သော လက်မပေါ်သို့ ထွီခနဲ နေအောင် တံတွေးထွေးချလိုက်သည်။ လက်မကို နှဲ့ပြီး လှုပ်ပေးလိုက်ရာ တံတွေးများ စိမ့်ဝင်လာသည်။ ဖင်ဝလေးက အေးခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ နန်းယမုံ စအိုဝလေးအား အလိုလို ကျုံ့ မိသည်။
“မမ .. စိတ်လျှော့ထား .. ဖင်ဝကို အရမ်းတင်းမထားနဲ့ ဟုတ်ပြီလား ..”
“အင်း .. ဇွဲ .. ဖြေးဖြေးနော်”
“ဟုတ် .. မမ”
တံတွေးအကူအညီရော၊ ရွှဲရွှဲစိုနေသော အဖုတ်ထဲမှ ထွက်သည့် စောက်ရည်ကြည်များ၏ အကူအညီရော ပေါင်းကာ ပြင်ဆင်ပြီးနောက် လီးထိပ်ဖူးဝကို သေချာတေ့သည်။ တအားကို ဖိသွင်းပစ်လိုက်ချင်သည့် စိတ်က များနေပေမယ့်၊ နောက်ပေါက်ကို ဆက်ဆံသည်မှာ နန်းယမုံအတွက် ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ဆိုတာ ဇွဲ သိပါသည်။ သို့အတွက်ကြောင့် အဖုတ်ပေါက်ထက် များစွာသေးငယ်သော စအိုပေါက်ထဲသို့ သူ့လီးဒစ် ဝင်နိုင်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားသည်။ အားအရှိန်ကို ၁%လောက်မှစ၍ တစ်ကြိမ်လျှင် ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက် ထပ်ကာ တိုးတိုးသွားသည်။ ရာခိုင်နှုန်း တစ်ရာပြည့်ဖို့တော့ မစောင့်လိုက်ရပါ။ နန်းယမုံက စိတ်ကိုလျှော့ပြီး ဖင်ပေါက်ကို ဖွင့်ထားပေးရာ ၇၀% ကျော်ကျော်လောက်တွင် လီးဒစ်ဖူးက အထဲသို့ မြုပ်ဝင်သွားသည်။
“အား … ကျွတ် … ကျွတ် ..”
“ရှစ် .. အရမ်းကျပ်တာပဲ မမ .. သိပ်ကောင်းတယ် .. ဆိုးဂွတ်”
တစ်ယောက်က နာလို့ ညည်းတာဖြစ်ပြီး၊ တစ်ယောက်ကတော့ ကောင်းလွန်းလို့ ညည်းတာဖြစ်သည်။ နာတာတော့ နာနေပေမယ့် နန်းယမုံ ရုန်းကန်ပြီး ထွက်သည်တော့ မလုပ်ပါ။ စားပွဲစွန်းကိုသာ လက်နှစ်ဖက်နှင့် တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားရာ သူမ၏ လက်ဆစ်လေးများသည် အားပြုထားရသည့်အရှိန်နှင့် အဖြူရောင်တောင် သမ်းလာနေရှာသည်။
“မမ .. ဆက်သွင်းမယ်နော် .. ခန အောင့်ခံထား”
အပြစ်အနာအဆာဆိုလို့ အမည်းစက်တစ်စက်တောင် မရှိသည့် ဖြူနုဖွေးအိနေသော တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်အား ပေါင်းစပ်ထားသည့် စအိုပေါက်နုနုလေးအား သူ့လီးကြီးက ထိုးခွဲကာ ဝင်ရောက်နေသည့် မြင်ကွင်းသည် ဇွဲအတွက်တော့ ၂၀၁၅အတွက် ကြည့်အကောင်းဆုံးသော မြင်ကွင်းသာဖြစ်သည်။
ချော့သွင်းလိုက်၊ ခနရပ်ထားလိုက်၊ အားစိုက်ကာ ထပ်ဖိထည့်လိုက်နှင့် အချိန်မည်မျှ ကုန်သွားမှန်း မသိ။ တော်တော့တော်သေးသည်။ စောစောတုန်းက ပြီးချင်သလို ဖြစ်နေသော ဇွဲ .. ဖင်ပေါက်ထဲ လီးဝင်အောင် ကြိုးစားနေရသဖြင့် ပြီးချင်စိတ်က နည်းနည်းပျောက်သွားသည်။ လီးအရင်းပိုင်းနှင့် တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းကြီးတွေ ထိဖို့ နဲနဲလေးသာ လိုတော့သည်အချိန်တွင် ဇွဲ ခနနားလိုက်သည်။
“မမ အဆင်ပြေလား ..”
“တစ်ဆို့ဆို့ကြီးနဲ့ .. နေရထိုင်ရတာတော့ တမျိုးကြီးပဲ”
“ဒါက အစမှတ်လို့ပါ .. လီးအဝင်အထွက်ဖြစ်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာ .. မမ ဆွေမျိုးမေ့သွားရစေမယ် .. ဟီး .. ဟီး”
“ဆွေမျိုးမမေ့လည်း မင်းဘော့စ်ကို မေ့ရင် ရပြီ .. ဆောင့်တော့ကွာ”
“စိတ်ချ .. မမ”
(လာပြီ) ဆိုပြီး အချက်ပေးသံအဆုံး၌ ဇွဲ သူ့လီးကို ပြန်ဆွဲထုတ်၍ အားနှင့်တစ်ချက် ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။ ကျပ်သည်ကတော့ တကယ်ကို ပြုတ်တူနှင့် ညှပ်ထားသလား ထင်ရသည်။ သို့သော် ထိုပြုတ်တူသည် နူးညံ့လွန်းသော ကတ္တီပါသားနှင့် အလားသဏ္ဌာန် တူနေပါသည်။ တစ်ချက်ချင်း ဖြေးညင်းစွာ ပြန်ထုတ်လိုက်၊ အားနှင့်ဆောင့်သွင်းလိုက်နှင့် အပျိုရည်ပျက်ခါစ ဖင်ပေါက်လေးကို စိတ်တိုင်းကျ လိုးဆောင့်နေသည်။ သူ့ဆောင့်လိုက်တိုင်း ဖင်ဆုံကြီး လှုပ်ခါသွားပြီး စအိုပေါက်လေးကတော့ အစွမ်းကုန်ကို ပြဲလန်လို့နေသည်။
“အင်း … အာ့ .. ဇွဲ .. အား … အာ့ .. ဇွဲ … လုပ် .. လုပ် … အာ့”
အသွင်းအထုတ်မှန်လာသည်နှင့်အမျှ နန်းယမုံ၏ ဖင်ပေါက်လေးသည် ဇွဲ၏ လီးကို ကောင်းကောင်းလက်ခံလာနိုင်သည်။ နာသေးတာတော့ နာနေသေးပေမယ့် ထိုနာတာနှင့်တွဲ၍ ရရှိလာသော ခံစားမှုဖီလင်ကို မက်မောခုံမင်လာသည်။ ဇွဲ၏ ဆောင့်ချက်နှင့်ညီညီ သူမတင်ပါးကို ကော့ကော့၍ ပေးသည်။ ဇွဲကလည်း နန်းယမုံတစ်ယောက် ဖင်အလိုးခံရတာ ဇိမ်တွေ့လာပြီဆိုသည်ကို နားလည်သည့်အလျောက် အလျှော့မပေးတော့ဘဲ လီးကို ဆောင့်ချက်ပြင်းပြင်းများ သုံးကာ လိုးသည်။
“အိုး … ရက်စ် … ဆောင့် … အာ့ .. အား .. မမ ပြီးတော့မယ် … ပြီး … ပြီးပြီ ..”
“အား .. ဖက်ခ် … ထွက် .. ထွက်ပြီ”
နန်းယမုံ၏ ဖင်ပေါက်ရော၊ အဖုတ်ရော ရှုံ့ ပွရှုံ့ ပွဖြစ်ကာ အကြီးအကျယ် ပြီးသွားသလို၊ ဇွဲလည်းပဲ ဖင်သားတွေ ကျုံ့ ကာတုန်ဝင်သွားသည် အထိ အကောင်းကြီးကောင်းပြီး လရည်တွေ ပန်းထုတ်မိသည်။ တကိုယ်လုံးရှိ အားအင်တွေ နန်းယမုံ ဖင်ပေါက်လေးထဲ စီးဝင်သွားသလို ခံစားရသည်။
“အရမ်းကောင်းတာပဲ မမ ရယ် ..”
နောက်ဘက်နားရှိ ထိုင်ခုံပေါ်သို့ ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ကာ ကျသွားရင်း ဇွဲတစ်ယောက် မောပန်းသံနှင့် ပြောရှာသည်။ နန်းယမုံကလည်း အသက်ကို မှန်မှန်ဖြစ်အောင် တဟင်းဟင်းနှင့် ရှူနေရင်းမှ သူ့ကို လှမ်းကြည့်ရင်း ယဲ့ယဲ့လေး ပြုံးပြသည်။
“မမလည်း အရမ်းကောင်းသွားတယ် .. ဇွဲ”
ဘာပြောရမှန်း မသိဘဲ ဇွဲ ငြိမ်နေစဉ်မှာပင် နန်းယမုံက အံ့သြဖွယ်ရာ အပြုအမူတစ်ခုကို ပြုလုပ်လိုက်သည်။ ဇွဲ ရှေ့ တွင် ဒူးထောက်ကာ ထိုင်လိုက်ပြီး အခုထက်ထိ မချွတ်ရသေးသော ကွန်ဒုံးကို လိပ်ကာ ချွတ်ယူလိုက်သည်။ လရည်တွေ ပြည့်နေသော ကွန်ဒုံးကို လက်ဖဝါးပေါ်တွင်ကာ ခနကြည့်ပြီးနောက် မူနွဲ့နွဲ့နှင့် ပြုံးပြသည်။ ထို့နောက်တွင် ချွဲကျိကျိဖြစ်ကာ ကျန်ခဲ့သော သူ့လိင်တန်အား လက်နှင့်စုပ်ကိုင်ပြီး အပေါ်အောက် လျှာနှင့် လျက်ပေးသည်။
ဇွဲတစ်ယောက် ထိုင်နေရာမှ ဖင်ကြီး ကြွမတက်အောင်ပင် မနည်း သတိထားနေလိုက်ရသည်။ စိတ်ကျေနပ်သည်အထိ လျက်ပြီးသွားလို့ နန်းယမုံက နောက်ဆုံးပိတ်အနေနှင့် သူ့လီးထိပ်အား ပြွတ်ခနဲနေအောင် နှုတ်ခမ်းလေးနှင့် နမ်းပြီး လွှတ်ပေးလိုက်သည်တွင် ဇွဲ၏ လီးက ပြန်၍တင်းမာစတောင် ပြုနေသည်။
“အိုကေ .. ဒီလောက်ဆို ကင်မရာကို ပိတ်လိုက်လို့ရပြီ .. မမတို့ ဟိုသစ္စာဖောက်နှစ်ယောက်ကို တုံ့ပြန်လက်စားချေဖို့ ကောင်းကောင်းကြီးလုံလောက်နေပြီ ထင်တယ် .. သေချာတယ် ဒင်းတို့တော့ မမတို့ကို ဂျဲလက်စ်ဖြစ်ယုံမက ဒါတွေမြင်ရင် ဆွေ့ဆွေ့ခုန်အောင် ဒေါသထွက်နေကြမှာ ..”
ဒေါ်နန်းယမုံက တက်ကြွစွာ ပြောနေသလောက် ဇွဲကတော့ ပြုံးဖြီးဖြီးနှင့် ခေါင်းညိတ်ပြယုံသာ တတ်နိုင်တော့သည်။ အခု ရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံတွေနှင့် ဗွီဒီယိုကို ဦးမိုးလုံးဟိန်း မြင်လျှင် သေချာတာကတော့ သူအလုပ်ပြုတ်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သူပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကိစ္စမှန်သမျှကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်လျှင် ဇွဲအနေနှင့် အလုပ်ပြုတ်မည့်ကိစ္စအား လုံးလုံးကို ခေါင်းထဲထည့်မနေတော့ပါ။ ဘော့စ်ဖြစ်သူ ကတိပေး ပြောထားခဲ့သည့် လကုန်လျှင်ရမည့် ဘောနပ်စ်ကိုလည်း မလိုချင်တော့ပါ။ ဦးမိုးလုံးဟိန်းက ပေးမည့်ဘောနပ်စ်ထက်သာသည့် အကျိုးအမြတ်ကို သူ့ရဲ့ အရမ်းကိုဆက်ဆီကျပြီး၊ အရမ်းကို လှပသည့် မိန်းမဖြစ်သူထံမှ ရရှိခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား …။